July 2018 – King Myanmar
The Best Seller Adult Online Shop in Myanmar.
July 28, 2018 by King Myanmar
(၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ )
အချိန်ကည ၁၀နာရီရှိနေပြီ ယောက်ကျားရဲ့
ရီထိုးနေပြီ အမျိုးတွေအိမ်သွားလို့မဖြစ် မေးရင်ဖြေရမှာခက်နေသည်။စဉ်းစားမရဖြစ်နေသည်။
က ကိုယ့်မှာအပြည့်ရှိနေတာမို့ ဒေါ်အေး
အးဝင်း ဖြစ်ချင် ရာဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု
စကားက မိမိစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေ တော့သည်။
ယောက်လိုခင် မင် ရင်းနှီးပြီး အ ရောတဝင်နေ
ခဲ့မိတာပါ ခုတော့ ယောက်ကျားကိုရွဲချင် တဲ့
စိတ်က ပေါ်လာတာမို့။
“ဒေါက်းးးဒေ့ါက်းးးဒေါက်းး”
“ဟာ အ မေ ”
ဒေါ်အေးအေးဝင်း လည်းဘာမှမ ပြောတော့
ပါ တီဗွီစားပွဲဘေးမှာရှိတဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်
“အ မေ ဘာဖြစ်လာတာလဲ”
လိုက်သည်။ဒေါ်အေးအေးဝင်းအိမ်အလာ လင် မယားစကားများနေတာမို့ ကိုယ့်အခန်း
ဒါပေမဲ့အ ကြောင်းစုံတော့မသိပါ မိမိကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုတော့ကြားလိုက်
“မ နေ့ညက မင်းနဲ့ထွက်သွားတာညဉ့်နက်
လို့ မ တော်တစ်ယော်ထင် လို့စကားများပြီး
ဒေါ်အေးအေးဝင်းဒီတိုက်ခန်းထဲကို အမြဲရောက်နေကျဖြစ်သည်။မိုးထက်ဆို
သော ကလေးကလည်း မိမိအ ပေါ်အ မေ
တစ်ယောက်လိုသံယောဇဉ်ရှိနေပြီး ခင် မင်
မိုးထက်ဘာမှမ ပြောတော့ပဲ စားပွဲအောက်က
ကျမ ကြိုက်တတ်တဲ့နောက် ထပ်ဘီယာပုလင်းထ်ုလိုက်
“ကဲ အ မေ စိတ်ညစ်ပြေ လုပ်လိုက်ဦ်း ဒီမှာအာလူးကြော်”
ဘာမှမ ပြောတော့ပဲ ဖန်ခွတ်ထဲပြည့်လုနီးပါး
လာကြတယ်။ဒေါ်အေးအေးဝင်းမလာခင်
“ဦးကျော်က အ မေကို ဘာပြောလိုက်လို့
လဲ အ မေရ”
ဒေါ်ဝင်းမာလည်းမှန်လာပြီမို့ အရှိတိုင်းပြော
“ပြောရမှာ ရှက်ပါတယ် သားရာ မင်းနဲ့အ မေနဲ့ သားအမိလိုနေလာခဲ့တာခုမှ ညစ်ညစ်
“ဒီအချိန်ထိကြာအောင် မင်း အလိုးခံလာတာ
းတဲ့ ကဲ ကောင်းသေးဘား ကွာ”
“အ မေက ဘာမှပြန်မ ပြောဘူးလား”
မိုးထက် ဒေါ်အေးအေးဝင်း ဘယ်လိုပြန်
ဖြေတယ်သိချင် လာတာမို ::::::
”ုဟုတ်တယ် အလိုးခံလာတာလို့ ပြော
တီးနေခဲ့ရာမှ စိတ်နဲ့မှန်းပြီး ဒေါ်အေးအေးဝင်
လး မိုးထက် မိမိအိပ် ရာပေါ်ရောက်နေ သောဒေါ်အေးအေးဝင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီး
” အ မေကလည်း ဟုတ်လည်း မဟုတ်ပဲနဲ့
တင်းကားနေ သော ဒေါ်အေးအေးဝင်းရင်
နှစ်မွာနှင့် တင် သားစိုင် တို့ပေါ်လည်းမျတ်
“အ မေကလည်း သားမှ မလုပ် ရပဲနဲ့
မိုးထက် စကားခေါ်နေပြီဆိုတာသ ဘော
“သြော်းးးသားက တကယ်ဖြစ်ချင် တာလား
ကဲ့ ဒီည အ မေ ဒီမှာအိပ်မယ် မနက်စော
သွားမယ် ကဲ ဘယ့်နဲ့လဲ”
ဒေါ်အေးအေးဝင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။
နပြီ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့အလှမ်းဝေးနေတာမို့
မိုးထက်သဘောကျသွားသည် က လေးနှစ်
ယောက်မွေးပြီးပေမဲ့ ဒေါ်အေးအေးဝင်း
ကိုလိုးချင်နေတာကြာခဲ့ပြီ ညညသူ့ကိုခေါ်ပြီး အပြင် သွားကြ ပေမဲ့သားအရင်းလို ဆက်ဆံနေတာမိုဘယ်လိုမှအခွင့်မသာခဲ့
ခုတော့ အဆင်ပြေချင်တော့ အရန်သင့်ပင်။
ပင်ဖြစ်နေသည် စိတ် တိုင်းကျစိတ် ရှိသ လောက် ဆက်ဆံရတော့မည်။
“အ မေ ထမင်းစားဦးမလား သားပြင်ပေးမယ်”
“တော်ပြီ မစားချင် ဘူး”
ဒေါ်အေးအေးဝင်း အိပ် ရာပေါ်ခြေပစ်လက်
“ကဲ့ အ မေ ညဉ့်နက်ပြီအိပ်ကြ အောင် မနက်မှ အ မေသူငယ်ချင်းအိမ် သားလိုက်ပို့မယ်”
မိုးထက် ဒေါ်အေးအေးဝင်း ဘေးတွင် အိပ်လိုက်သည။်
ဒေါ်အေးအေးဝင်း တအားမူးနေသည် ယောက်ကျားနဲ့ကအလိုးမခံပဲနေလာတာ
မိုထက် ဒေါ်အေးအေးဝင်း အကျီ င်္ င်္ကြယ်သီးများကိုဖြုတ်လိုက် ရာ ထွားကြိုင်း
ျသော နို့နှစ်လုံးက မီးရောင်အောက်တွင်
ဖြူဖွေးစွာထွက်လာသည်။အကျီ င်္ပေါ်က
ပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးအးးအားသားး
လုံချီကိုလည်း အထက်က နေ အောက်ကို
ဆွဲချွတ်လိုက် ရာဒေါ်အေးအေးဝင်း အသာပင် ဖင်ကြွပေးရှာသည်။ခုမှဒေ့ါ်အေးအေးဝင်း၏အ ဝတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေး
ဆင် နှာမောင်းသဖွယ် ဒေါ်အေးအေးဝင်း
က လေးနှစ်ယောက်ထွက်အောင် ကိုကျော်မောင် အလိုးခံထားသောစောက်
ဖုတ်လေးမှာ လူပျိုလီးကို လက်တဲ့စမ်းအလိုး
ခံဖို့တာဆူနေသညို စောက်စိလေးပင် ချွန်ပြီး
ျစောက် ရည်များပင် ရွဲနေသည်။
မိုးထက်ဒေါ်အေးအေးဝင်းပေါင် ကြားခေါင်းဝင် လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို
စောက်ခေါင်းအတွင်းထိုးထဲ့လိုက် ရာ တစ်ခါ
ခါးလေးကို အိပ် ရာနှင့်တစ်တောင်လောက်
“အ မေကိုခုလို ဦးကျော် မှုတ်ပေးသေးလား”
“မလုပ်ဘူးပါဘူး အးးးအား သားရယ်”
သည် ဒေါ်အေးအေးဝင်းစောက်ဖုတ်မှ
သက်သေခံနေသည် စောက် ရည်များတ
ခါမှခုလိုအရသာမ တွေ့ဘူးဘူးကွယ် အား
တ်လိုက် စောက်စိလေးပွတ်လိုက် လျာနဲ့
လိပ်တက်နေ အောင် ခံစားနေရသည်။
“တော် ပြီသားရယ် အ မေ အူတွေတောင်
ရတာမို့ စိတ်ကျေနပ်သလိုခံစားလိုက် ရသည်။
“ဘယ့်နဲ့လည်း ဦးကျော်ထက်ကြီးလား ”
“အမလေး ကြီးလှချည့်လား သားရယ်”
“အရင် နဲ့ကအ မေကိုမှန်းပြီးဂွင်းထုလာတာညတိုင်းဆို
သ ဘောပေါက်စွာ စုတ်ပေးလိုက်မိသည်။
”ဒါကျ ပိုင် ပါ့လား အ မေက စုတ်နေကျလား”
“ဟုတ်တယ် တော်ပြီ အတုတ်ကြီးပဲ”
ဒေါ်အေးအေးဝင်း မိုးထက်လီးကြီးကိုအလိုး
ကိုပုခုံးပေါ်တင် လိုက်ပြီး ထွားကြိုင်းသော
သော လီးကြီးကို ဒေါ်အေးအေးဝင်းလက်
တင် ပါးဆုံကို ဖိချလိုက်သည်။
ဗျစ်းးဗျစ်းးးဘွတ်းးးအင့်းးအင့်းးဘွတ်
ဒုတ်းးးးအား သားသား ဖြေးဖြေး လုပ်
မိုးထက်အချက်၂၀လောက်စောင့်ချလိုက်သည်။ဒေါ်အေးအေးဝင်း ကျေနပ်စွာကာမကို
သွေးမဆုံးသေးပဲ ဗိုက်ကြီးနိုင် တာကိုပင်
နေ သောမိုးထက်လီးက မိမိစောက်ဖုတ်၏
“အ မေ ကောင်းလားဟင် ဦးကျော်နဲ့ သားနဲ့
“သားကတုတ်ပြီးရှည်တော့ နာတယ် ကောင်း
“သား မ တော်သေးဘူးလားဟင် ဘယ်နှစ်
ဒေါ်အေးအေးဝင်း ကျေနပ်စွာမေးလိုက်ပြီး
မဝနိုင်ဖြစ်နေတာမို့ မိုထက်တင် သားများ
“နှစ်ချီ ရှိပြီ အ မေ သားအိမ်ထဲလည်း သားလီး
ဒုက္ခ။ ဆက်မစဉ်းစားချင်တော့ပါ ဖြစ်ချင် ရာ
တာ ခုလိုလဲမ နေခဲ့မိပါ ခုတော့ ဒေါ်အေးအေးဝင်း နွားအိုမြက်နုကြိုက်ဆိုတဲ့
“ဟုတ်တယ်သားရယ် အ မေဗိုက်ကြီးရင်
ဒုက္ခပဲ သားသားအရည်တွေက အပြင်တော
ကုန်းပြီးလိုးလိုက်။ကုတင်အောက်က နေ စောင့်လိုးလိုက် ။ဝမ်းလျားမောက်ပြီးအလိုး
“အ မေ သားကိုတစ်ခု လောက် လိုက်လျော
“သား ဖင် လိုးကြည့်ချင် တယ်”
ဒေါ်အေးအေးဝင်း ကြက်သီးပင်ထလာသည်။
“ရပါ့မလား သားရယ် အ မေတစ်ခါမှမခံဘူး
ပါဘူးကွယ် သားဟာက အကြီးကြီးပဲ”
မိုးထက် စအိုဝ လေးထဲ လက်ညှိးလေးထည့်လိုက်တောါ့လွယ်စွေဝင်
“ရပါတယ် အ မေရယ် သားဖြည်းဖြည်းထည့်မယ်နော်”
လုံးကို အိပ် ရာခင်းနှင့်ကပ်နေ အောက်ကုန်ုး
သန်းနေ သော ခရေပွင့် ပွင့်ပုံစအိုလေးကို
“ဖြစ်ပါ့မလား သားရယ် အ မေ ကြောက်တယ်
ဒစ်းးးဒစ်းးဘွတ်းးအမလေးးးအားးးး
အ မေ့းးးးနားးးနာတယ် သားရယ်းးး
ဒေါ်အေးအေးဝင်းဖင် ထဲမီးစနှင့်ထိုးလိုက်သ
လိုခံလိုက် ရ ပေမဲ့ ကောင်းတဲ့အရသာက
July 11, 2018 by King Myanmar
ထိုအခါ သူဇာ ၏တင်သားကြီးများ သည်ပိုမိုကာကြွတက်လာပြီး ထွန်းကျော် သည် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ နေရာပြန်ယူလိုက်သည်။ဖါးစီးငါးစီးဆိုသည်မှာ ဒီလိုပုံစံမျိုးကို ခေါ်ပုံရလေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူဇာ သည် ထွန်းကျော်၏အောက်ဖက်တွင်ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုသူမ၏ပခုံးများဆီသို့ရောက်အောင် တွန်းတင်ခြင်းခံထားရသဖြင့် ဖင်သားကြီးများသည် အိပ်ယာပေါ် မှကြွတက်လျက် သူမ ၏ ရတနာရွှေကြုတ် လမ်းကြောင်းမှာ အစွမ်းကုန် ပွင့်အာလျက်ရှိသည်။အပေါ်တွင်ရှိသောထွန်းကျော်သည်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက် သူဇာ၏ပေါင်ရင်းနှစ်ဖက်ကိုသူ့ပေါင်များဖြင့်ဖိလျက်မြေအောက်စိုက်ထိုး နည်းဖြင့် သူ၏ ငပဲကြီးဖြင့် ဖိကာဖိကာထိုးသွင်းလေတော့ နှစ်ယောက်စလုံး မကြုံဖူးအောင်ထူးကဲလှသည့်အရသာကိုတင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ခံစားရလေသည်။ ထွန်းကျော် ၏အားပြင်းလှသော ဆောင့်ချက်များကြောင့် သူဇာ ၏ တင်သားများ နှင့် ပေါင်တံနှစ်ချောင်းတစ်လျောက်ရှိ အသားစိုင်များသည် အိကနဲ အိကနဲ တုန်ခါသွားကြလေသည်။ ထိုသို့ ဆောင့်လိုးနေရင်း နှင့် ထွန်းကျော် ၏လက်တစ်ဖက် က သူမ ၏ မို့မောက်ကာကြွတက်နေသော ရင်အစုံကိုလှမ်းကာ ဆွဲကိုင် ဆုပ်နယ်ပေးရင်းပေါင်တံအရင်းအတွင်းသားများ နှင့်တင်သားအိအိကြီးများကိုလည်းဆုပ်နယ်လိုက်အသာအယာပွတ်သပ်ပေးလိုက်ဖြင့် မအားရအောင် အလုပ်ရှုပ်နေလေသည်။ သူဇာအဖို့အရသာရှိလိုက်သည်မှာတစ်ကိုယ်လုံးပင်အီဆိမ့်နေအောင်ကောင်းလှပေသည်။ သူမ ၏ နှလုံးသည်လည်း ခုန်လိုက်သည်မှာ ရင်ပတ်တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်မတတ်တော့ပင်။ ထွန်းကျော် အဖို့မှာလည်း သူမ၏တင်သားကြီးများနှင့် နို့အုံကြီးများကို စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်သုံးသပ်ခွင့်ရနေသဖြင့် ကာမသွေးများတစ်ကိုယ်လုံးသို့ အရှိန်အဟုန်မပြတ်စီးလျက်ဆောင့်ချက်များမှာလည်းပိုမိုနက်ရှိုင်းအားပါလာလေသည်။ ထိုသို့အရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆောင့်နေရာမှ ထွန်းကျော် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်သောအခါ သူဇာ မှာ နားမလည်နိူင်အောင်ဖြစ်သွားရသည်။ သူဇာ .. ခါးကိုလိမ်ပြီးဘယ်ဖက်ကို စောင်းလိုက်ပါလား .. ထွန်းကျော်ပြောသည့်အတိုင်း သူဇာ သည် သူမ၏ကိုယ်ကို ဘယ်ဖက်သို့စောင်းလိုက်သောအခါ ထွန်းကျော် ကလည်း အလိုက်သင့်ပင် သူမ၏ ညာဖက်ခြေထောက်ကို ဘယ်ဖက်ပေါင်ပေါ် သို့ ထိန်းကိုင်ကာ ထပ်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာ၏အနေအထားသည်ပုစွန်ထုပ်ကွေးကဲ့သို့ဖြစ်သွားချေလေပြီ။ ထို့နောက် ထွန်းကျော် သည် သူ၏လိင်တန်ကြီးကို တင်သားများနောက်မှ မသွင်းဘဲ အဖုတ်တည့်တည့်မှ လိုးသွင်းလိုက်လေသည်။ ထိုအခါ သူဇာ ၏ ပေါင်များသည်တစ်စောင်းအနေအထားဖြင့် ထပ်လျက်ရှိနေသောကြောင့် သူမ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများသည် ထွန်းကျော် ၏ လိင်တန်ကြီးကို စည်းစည်းပိုင်ပိုင်ဖြင့် ရစ်ပတ်ဖျစ်ညှစ်ပေးသလိုဖြစ်သွားလေသည်။ ထွန်းကျော် အတွက် အလွန်မှပင် စည်းစိမ်ထူးလှသလို သူဇာ အဖို့မှာလည်း ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော ထွန်းကျော် ၏ ပူနွေးမာတောင့်နေသော လိင်တန်ကြီး၏ပွတ်တိုက်ဝင်ထွက်နေမှုကို ပိုပြီးပီပီပြင်ပြင် ခံစားရလေသည်။
ထို့ပြင် ထွန်းကျော် တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်လေတိုင်း သူမ ၏ ရသာဖူးလေးကို ကျကျနနပင် ထိမိလေရာ အလိုးခံနေရသော သူဇာ ၏ ကိုယ်လုံးဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး တစ်ခုလုံးမှာ ကာမဇောအဟုန်ကြောင့် ပန်းနုရောင်ပင်မကတော့ပဲ နီမြန်းနေရရှာချေပြီ။ မကြာလိုက်ပါချေ၊ သူဇာ တစ်ယောက် သူမ ၏ဖေါင်းကားနေသော တင်သားကြီးများ ရှေ့နောက်ဘေးဘယ်ညာ လူးကာ တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်လျက် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်လေသည်။
သူဇာ ၏ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းများသည် လည်း တင်းကြပ်စွာဖြင့် ထွန်းကျော် ၏လိင်တန်ကို ရေဘ၀ဲစုပ်ခွက်များစုပ်သကဲ့သို့ စုပ်ယူလေသောအခါ ထွန်းကျော် သည် သုတ်ရည်များသာမက တစ်ကိုယ်လုံးလှည့်ပတ်နေသော သူ၏သွေးများပင် သူ့လိင်တန်မှထွက်သွားဘိသကဲ့သို့ ခံစားရလျက် ကာမ၏အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားလေတော့သတည်း။
ထွန်းကျော် သည် နှေးရာမှမြန်၊ မြန်ရာမှပြင်း၊ ပြင်းရာမှ လေးဖျဉ်းတွဲ့တွဲ့ စသည်ဖြင့် စည်းချက်များကို အသွင်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးလိုးလေသောအခါ ခင်ခင်စိန် ၏ခေါင်းများသည် ချာချာလည်ကာ မူးမေ့တော့မတတ် ကာမဂုဏ်အာရုံ ၏ဖမ်းစားခြင်းကိုခံရလေသည်။ သူမ၏အသက်ရှုသံများကား ပြင်းထန်ပုံမှာ တစ်မိုင်ခရီးကို မနားတမ်းတရကြမ်းပြေးလာသောသူကဲ့သို့ပင်။ ထွန်းကျော် ၏လိုးပုံလိုးနည်းမှာကောင်းလွန်းလှသဖြင့် သူမအဖုတ်အတွင်းမှ အရည်ကြည်တို့သည် တရဟောပင်ထပ်မံကာထွက်လာလေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ထွန်းကျော် ၏လီးအ၀င်အထွက် စိတ်လာသည်နှင့်အမျှများသည်အခန်းထဲတွင်ပဲ့တင်ထပ်ကာနေတော့သည်။ ခင်ခင်စိန်သည်သူမ၏ဖင်ကိုတတ်နိူင်သမျှလေထဲသို့မြှောက်ထားပြီး ထွန်းကျော် ၏မီးပွင့်မတတ်လိုးဆော်ချက်များကို အားပါးတရခံယူနေရင်း မည်သို့ဖြစ်လာသည်မသိ၊ သူမ၏ကိုယ်ထဲမှ တစ်စုံတစ်ရာ သည် အပြင်သို့ထွက်ချင်နေသည်။ အားပါးတရဆောင့်နေသော ထွန်းကျော် ၏ လီးတန်ကြီး သည် ဖေါင်ကားတင်းလာပြီး ကာမသွေးများဦးနှောက်အတွင်းသို့ ဒလကြမ်းစီးဝင်သည့်အတွက်မျက်ရည်များထွက်မတတ်ခံစားနေရသောဒဏ်ကို မခံနိူင်တော့သောကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးရှိအားများကိုညှစ်ကာ အံကိုဖျစ်ဖျစ်မည်အောင်ကြိတ်ရင်း ၁၅ ချက်မျှဆောင့်ပြီးသောအခါတွင် အမလေး လေး.. မောင် မောင် မောင် ထွန်း .. အို ဟင် ဟင် … အွန် အွန် အို အို အား.. ဟု ခင်ခင်စိန် သည် တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လာပြီး သူမ၏ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်း အတွင်းနှင့်အပြင်နံရံများပါ ရှုံကာပွကာဖြင့် လက်များသည်လည်း အိပ်ယာခင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ရင်း သူမ၏ဆီးစပ် ကို ထွန်းကျော် ၏ ဆီးစပ် ရှိရာသို့ဖိကပ်လိုက်ပြီး ကော့ကာကော့ကာဖြင့် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်သွားလေသည်။ သူမ ၏ စောက်ဖုတ် နံရံများသည် ရှုံကာပွကာဖြင့် ထွန်းကျော် လီးတန်ပတ်လည်တစ်လျောက်ကို ညှစ်နေသောအခါတွင် ထွန်းကျော် သည်လည်း ခင်ခင်စိန် ပေါင်များကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သိုင်းဖက်ရင်း သူ၏ ခါးကိုကော့ကာ ပူနွေးပျစ်ထွေးသော သုတ်ရည်ပူများကို ခင်ခင်စိန် ၏ စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ တငေါ့ငေါ့ဖြင့် ပန်းထုတ်နေတော့သည်။
ညနေသစ်စက်ပိတ်တော့ထွန်းကျော်သစ်ကုန်ွသည်များနှင့်ညစာကျွေးရန်ပါသွားသဖြင့် လှလှမွန် တစ်ယောက်တည်းအိမ်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ တစ်ညနေလုံး ထွန်းကျော် ကိုမျှော်လင့်နေသော်လည်း ည(၉) နာရီထိုးသည်အထိ ထွန်းကျော် ပြန်မလာသေးသဖြင့် အိပ်ယာပေါ် သို့တက်လှဲနေလိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့တွင်မတော့ မမစိန် သည် ထုံးစံအတိုင်းပင် ကျောင်းသားများ၏လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များကို အမှတ်ဖျက်ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ လှလှမွန် သည် အိပ်ယာပေါ် တွင်လှဲနေရင်းနေ့ခင်းဖက်ကအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်ပြောင်းကာစဉ်းစားနေမိသည်။ နေ့ခင်းက သူမ၏နေ့စဉ်မျှော်လင့်တောင့်တနေခဲ့ရသော ဆန္ဒများပြည့်ဝခါနီးမှ အခြေအနေအရ ပျက်ပြားသွားခဲ့ရသည်ကို သူမ၏စိတ်ထဲတွင်ယခုထက်ထိတနုံနုံနှင့်မချင့်မရဲဖြစ်လျက်ပင်ရှိနေသေးသည်။ ထွန်းကျော် ၏လိင်တန်ကြီးသည် တကယ့်ကိုစံချိန်မီလှသည်။ ဟိုတစ်နေ့ နံက်ပိုင်း ထမင်းစားခန်းထဲတွင် သူမကို ထွန်းကျော် ကနောက်ဖက်မှနေ၍ ဖက်လိုက်စဉ်က(သူမကလည်း မိမိရရ ဖိကပ်ပေးလိုက်စဉ်) ထိတွေ့လိုက်ရသော ထွန်းကျော် ၏လိင်တန်၊ တစ်ဖန် နေ့လည်ကသစ်စက်ထဲတွင် သူမ ၏လက်ဖြင့် မိမိရရ ပွတ်သပ်ပေးခဲ့သော ငပဲချောင်းကြီးသည် နည်းနည်းနောနောကြီးမဟုတ်။ သူမ စိတ်ထင် (၇)လက်မလောက်တော့ရှိမည်။ မာလိုက်သည်မှာလည်း သံချောင်းအလားမှတ်ရသည်။ တစ်ကယ့်ကိုမက်လောက်တဲ့ ဟာကြီးပါလား။ လှလှမွန် တစ်ယောက် တွေးလေလေ စိတ်ပိုလှုပ်ရှားလေလေ။ သက်ပျင်းမောများကို ချလိုက်ရသည်မှာလည်း ခဏခဏ။ စိတ်လှုပ်ရှားလာသည်နှင့်အမျှ သူမ စောက်ပတ်အတွင်းတွင် ရွစိရွစိ ဖြစ်လာပြီး အစွမ်းကုန် ခံချင်စိတ်တို့ပေါ် လာသည်မှာလည်း ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရအောင်ပင်။ ဒီလို လီးတန်မျိုး နှင့် ကြုံချင်စမ်းလွန်းလှပါဘိ။ ဟော ချရပြန်ပြီသက်ပျင်းမော နောက်တစ်ချက်။ အိပ်ယာပေါ် တွင်လှဲနေရာမှ လှလှမွန်သည်ထကာကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီးသူမ၏အ၀တ်အစားများအားလုံးကို ချွတ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ အိပ်ခန်းတံခါးအတွင်းဖက်မှ ထိုးထားသော ဂလန့်ကို ဖြုတ်ကာ အိပ်ယာပေါ် တွင်ပြန်လှဲလိုက်ပြီး ထွန်းကျော် တစ်ယောက် ဒီတစ်ညတော့ သူမ၏အခန်းသို့လာမည်ဟု အသေအချာတွက်လိုက်ကာ အနားရှိစောင်ကို ကိုယ်ပေါ် တွင်လွှမ်းလိုက်ပြီး စိတ်ချလက်ချ အိပ်ပြစ်လိုက်လေသည်။
ခင်ခင်စိန်တစ်ယောက် ထွန်းကျော် ၏အခန်းမှပြန်ထွက်လာတော့ မနက်(၂)နာရီ ပင်ထိုးပြီးနေပြီ။ ထွန်းကျော် သည် ခင်ခင်စိန် ကိုညက(၃)ချီတိတိဆွဲပြစ်လိုက်သည်။ ဆက်တိုက်လိုးခြင်းမဟုတ်ပဲ နားကာ အသေအချာနှုးနှပ်ကာလိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ခင်စိန် ပြန်သွားပြီးမကြာမီမှာပင် ထွန်းကျော် လည်း မောပန်းကာအိပ်ပျော်သွားလေသည်။ မနက် ထွန်းကျော် နိူးလာတော့(၉) နာရီတောင်ထိုးတော့မည်။ ရေချိုးရန်အတွက် နောက်ဖေးသို့ထွက်လာသောအခါတွင် မီးဖိုချောင်ထဲတွင် အလုပ်ရှုပ်နေသော သူဇာ ကိုတွေ့လိုက်သည်။ ထွန်းကျော် ကိုတွေ့လိုက်သောအခါ သူဇာ ကပြုံးပြကာနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ * မျိုးမျိုး ရော သူဇာ မမစိန် ကျောင်းဆီပါသွားတယ် ကိုထွန်းကျော် သြော် ကိုထွန်းကျော် .. လှလှမွန် ကမှာသွားတယ် .. သစ်စက်ကို သွားနှင့်ပြီတဲ့ .. ကိုထွန်းကျော် အေးအေးဆေးဆေးမှသာ လိုက်လာခဲ့ပါတဲ့..* * ဟုတ်ကဲ့ .. ကိုထွန်းကျော် ရေချိုးပြီးရင် မနက်စာစားဖို့ သူဇာ အသင့်ပြင်ထားလိုက်မယ်နော် .. ကျေးဇူးပါပဲ သူဇာ ရေ* ထွန်းကျော် ရေချိုးခန်းထဲရောက်သည်အထိ တစ်မျိုးလေးလှကာစွဲဆောင်မှုရှိလှသောသူဇာ၏ရုပ်သွင်လေးကိုမြင်ယောင်နေမိသည်။ခါသေးရင်ချီကာတင်ကားနေပုံလေးကိုကစွဲမက်စရာကောင်းလှသည်။ အရပ်မြင့်မြင့် ပြီး ဖြူဖွေးသောအသားအရည်ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုအားက ပိုပြီးရှိလာသည်။ ဒီမနက်တွင်တော့သနပ်ခါးရေကြဲကိုပါးကွက်ကျားလေးကွက်ထားလေတော့ မို့မို့ဖေါင်းနေသော ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို ကြူကြူမွှေးချင်စရာ ကောင်းလွန်းပါဘိ။ ထွန်းကျော် သည် သူဇာ ၏အလှအပများကိုတွေးကာ စိတ်များကြွလာပြီး သူဇာ့ အပေါ် တွင်တပ်မက်စိတ်တို့ ပိုမိုလာခဲ့သည်။ ရေချိုးပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ ထမင်းစားခန်းထဲသို့ ထွန်းကျော် ၀င်လာသောအခါ သူဇာ ကိုမတွေ့ရတော့ချေ။
ထွန်းကျော် သည် သူဇာ အသင့်ပြင်ထားပေးသော ကြက်သားဟင်း နှင့်ပလာတာကိုကော်ဖီနှင့်မျှောပြီးစားလိုက်သည်မှာကုန်သလောက်ပင်ရှိတော့မည်၊ ယခုထက်ထိ သူဇာ့ အရိပ်အယောင်ကိုမမြင်ရသေး။ ထွန်းကျော် သည် စားသောက်ပြီးသောအခါ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ ကို မီးဖိုချောင်ရှိ ဘေစင် ပေါ် သို့တင်ထားပေးခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ဧည့်ခန်းဖက်သို့ထွက်အလာ သူဇာ တို့ သားအမိ အတွက်ပေးထားသော အခန်းရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ တံခါးသည် အနည်းငယ်ဟနေသဖြင့် ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ အိပ်ခန်းဆီသို့ ခြေလှမ်းလိုက်မိသည်။ဟနေသောတံခါးကြားမှအိပ်ခန်းထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါတွင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် ထွန်းကျော် မှာရင်ထဲတွင် ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားရလေသည်။ သူဇာ သည် ကုတင်ပေါ် တွင်ပက်လက်လှန်၍နေပြီး သူမ၏ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းတွင် အ၀တ်မရှိဘဲ ဖြူဖွေးသောပေါင်တံနှစ်ချောင်းကိုဒူးဆစ်နေရာမှနေပြီးကွေးကာထောင်ထားသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏လက်တစ်ဖက်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင်ထည့်ကာ လက်ညှိုးကို သူမ ၏အခေါင်းအတွင်းသို့ထိုးကာသွင်းထားပြီး ထုတ်ချည်သွင်းချည်ဖြင့် လုပ်ကာနေသည်။ သူဇာ ၏ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ကျောက်ပွဲစားခင်မောင်ခရီးထွက်သွားသည်မှာ(၂)ပတ်ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ အိပ်ယာနှင့် ဝေးနေသည်မှာ အတန်ကြာသွားပြီဖြစ်သဖြင့် သူဇာ တစ်ယောက် ကာမဆန္ဒများ ထိန်းမရအောင် ဖြစ်နေပုံရသည်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ဟိုတစ်နေ့က သူဇာ၏ရင်နှစ်မွှာကိုမတော်တဆဆုပ်နယ်မိသလိုဖြစ်သွားသည် ကိုအစပြုကာ သူဇာ သည်ယခုလိုလုပ်ကာ သူ့ကိုများမြှုဆွယ်နေတာလား ဟု ထွန်းကျော် စဉ်းစားနေမိသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူဇာ ကိုရအောင်ချစ်တော့မည် ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်လျက် အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ထွန်းကျော် လှမ်းကာဝင်လိုက်သည်။ တစ်အိမ်လုံးတွင်နှစ်ယောက်ထဲရှိသဖြင့် ထွန်းကျော် သည် အိပ်ခန်းတံခါးကို ဂျက်မထိုးတော့ပဲ စေ့ရုံသာစေ့ထားခဲ့သည်။ ထွန်းကျော် ကုတင်ဘေးသို့ရောက်လာသည်အထိ သူဇာမသိသေး။သူမ၏မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုမှိတ်ကာလက်ညှိုးဖြင့်စောက်ခေါင်းအတွင်း ခပ်သွက်သွက် ထုတ်ချည်သွင်းချည်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေဆဲ။ တစ်ထပ်တည်းသာ ၀တ်ထားသော သူမ ၏ ရင်စေ့အင်္ကျီ သည် အပေါ် နှိပ်သီး နှစ်လုံးခန့်ပြုတ်ထွက်နေသဖြင့် ၀င်းမွတ်ကာနေသော သူမ ၏ စနေနှစ်ခိုင် သည် တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပြူတစ်ကာထွက်နေသည်။ လက်ညှိုးဖြင့် ထုတ်ချည်သွင်းချည် လုပ်နေသော သူမ ၏ ရတနာရွှေကြုတ် မှာ အတော်ပင်ဖေါင်းကားကာနေပြီ။ ထို့အပြင် အမွှေးအမှင် တစ်ပင်မှ မရှိသဖြင့် အဆီတ၀င်းဝင်း ဆိုသကဲ့သို့ ၀င်းအိကာနေသည်။ ပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြား စွဲမက်စရာကောင်းနေတာကတော့ အကွဲကြောင်းလေးအတွင်းမှ တစ်လက်မ၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်အပြင်ဖက်သို့ငေါက်တောက်လေးထွက်နေသော သူမ ၏ ပတ္တမြားသွေးရောင်သန်းနေသော ရသာဖူး ခေါ် နီတာရဲ စောက်စေ့လေးပင်ဖြစ်သည်။ ထွန်းကျော် သည် ဦးစွာ သူ၏ အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ သူ၏ ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သောအခါတွင် သူ၏ငပဲချောင်း သည် တငေါ့ငေါ့ဖြင့် အစာစားရတော့မည်ကို သိနေသည့်အလား ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ ထောင်မတ်နေလေသည်။ ထို့နောက်တွင် သူဇာ ရှိရာ ကုတင်ပေါ် သို့လှမ်းတက်လိုက်သောအခါ *အို .. ကိုထွန်းကျော်လန့်သွားသဖြင့်သူဇာသည်ထထိုင်မည့်ပုံဖြင့်လူးလဲကာထလိုက်ပါသေးသာည်။ ဒါပေမဲ့လည်းထွန်းကျော်သည်သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုဖက်ကာ သူ၏ ကိုယ်လုံးကြီးဖြင့်ဖိချလိုက်လေသည်။ပြီးနောက်သူမ၏ရင်စေ့အင်္ကျီတွင်တပ်လျက်ကျန်နေသောနှိပ်စေ့များကိုတစ်ချက်တည်းဆွဲကာဖြုတ်ချလိုက်လေသည်။ သူဇာ ၏အင်္ကျီရင်ပတ်လည်း အပွင့်၊ ထွန်းကျော်၏အငမ်းမရဖြစ်နေသော မျက်နှာကြီးကလည်း သူမ ၏ စနေနှစ်ခိုင်ဆီသို့အကျပင်* ကို.. ကိုထွန်းကျော် .. မတော်ပါဖူးရှင် .. မ မ လုပ်ပါနဲ့ … * သူဇာ သည် အသံလေးတုန်တုန်ယင်ယင်ဖြင့် ငြင်းဆန်ပါသော်လည်း သူမ ၏ကိုယ်လုံးလေးကား လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဖြင့် သူမ ၏ နို့အုံကြီးများကို ပင့်ကာတင်ပေးနေသည်။ ထွန်းကျော် သည် ပထမတစ်လုံးကို ငုံကာစို့သည်။ တစ်လုံးပြီးတော့ နောက်တစ်လုံးကို ဆက်ကာစို့ပေးပြန်သည်။ နဂိုကပင် ခပ်ထောင်ထောင်လေးဖြစ်နေသော သူဇာ ၏ နို့သီးလေးများသည် မို့ကာ ကော့ချွန်တက်လာသဖြင့် ပိုပြီးမက်မောစရာကောင်းလာသောကြောင့် ထွန်းကျော် သည် သူဇာ ၏ဖြူဖွေးဖေါင်းအိနေသော နို့အုံသားလေးများကို ပတ်ပတ်လည် အနှံ့ နှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖိဆွဲလိုက် လျှာဖျားလေးဖြင့်ထိုးလိုက် ယက်ပေးလိုက်ဖြင့် သူ၏ ချစ်ခြင်းအမှုကိုတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားနေလေသည်။ ပြော၍မရသဖြင့်လား သို့မဟုတ် မပြောချင်လောက်အောင် ကာမစိတ်များဖုံးလွှမ်းလာသောကြောင့်ပင်လားမသိပါ၊ သူဇာ ၏နှုတ်ဖျားဆီမှ ငြင်းပယ်သံများဆက်လက်မထွက်လာတော့ပဲ မျက်လုံးများသည် စင်းကာကျသွားလေသည်။ နို့အုံးလေးနှစ်ခုကိုနေရာအနှံ့နမ်းပြီးသွားသောအခါတွင် ထွန်းကျော် သည် သူဇာ ၏နံစောင်းတစ်လျောက်အား သူ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ဖိလိုက် ဆွဲလိုက်နှင့် ဆက်ကာနမ်းပေးနေပြန်သည်။ သူဇာ ကား ငါးဖယ်ပြန်လူးသကဲ့သို့ တတွန့်တွန့်ဖြင့် မည်သို့မျှအငြိမ်မနေနိူင်တော့ချေ။ ထို့အတူပင် ထွန်းကျော် ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်းတွင်လည်း ရမ္မက်သွေးများဖြင့် ဗလောင်ဆူကာ လာနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထွန်းကျော် သည် ခါးဆန့်ကာ အိပ်ယာပေါ် တွင်ထကာထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် သူဇာ ၏ ရတနာရွှေကြုတ် အား အကဲခပ်သလိုကြည့်လိုက်သောအခါတွင်တော်တော်ကြီးကိုဖေါင်းမို့နေသည်ကိုတွေ့ရပြီး အ၀တွင်လည်း ချစ်ရှေ့ပြေးအရည်များ လည်း ဟီးလေးခိုနေသည်။ ထိုသို့ ထွန်းကျော် စိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာပင် သူဇာ သည် သူမရင်ပတ်တစ်ခုလုံး ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသော်လည်း ဖုံးကွယ်ရန်မကြိုးစားသည့်အပြင် သူမ ၏ အင်္ကျီကိုချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီးနောက် ထွန်းကျော် ကိုကျောပေးကာတစ်စောင်းလေးဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါတွင် သူဇာ ၏ဖင်းသားအိအိကြီးများ သည် ဖေါင်းတစ်ကာ မို့မောက်သွားကြပြီး ထွန်းကျော် ကိုမျက်စပြစ်နေသယောင်ယောင်။ ဒီလို ဖိတ်ခေါ် နေသော ဖင်သားကြီးများကြောင့် ထွန်းကျော် ၏ ရင်ထဲတွင် ဖျင်း ကနဲဖြစ်သွားရပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ထွန်းကျော်သည်ဖင်သားအိအိကြီးများဆီသို့ သူ၏ နှာခေါင်းကိုနှစ်ကာ နေရာအနှံ့နမ်းရှိုက်ရင်းသူ့လက်များဖြင့်လည်း အငမ်းမရပင် ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ကာ ကိုင်တွယ်ဖျစ်ညှစ်လေတော့သည်။ ပြီးတော့ ထွန်းကျော် သည် သူဇာ ၏အပေါ် ဖက်ခြေထောက်ကို မယူလိုက်ပြီး ဒူးကိုကွေးစေကာ သူဇာ ၏ပုခုံးဆီသို့တွန်းကာတင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကုတင်ပေါ်တွင်ဆန့်ထားသောသူဇာ၏ပေါင်ကိုခွကာဒူးထောက်ကာထိုင်လိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုပင် စူမို့မို့လေးဖြစ်နေသော သူမ ၏ အကွဲကြောင်းနှစ်ခုအကြားရှိ နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုထဲသို့ သူ၏လိင်တန်ကြီးကို တရစ်ချင်းနှဲ့ကာသွင်းလေတော့သည်။ ထိုသို့သွင်းရင်းတစ်ဆုံးထိဝင်သွားသောအခါ ကုတင်ပေါ် တွင် ဆန့်ထားသော သူဇာ၏ခြေထောက်ကိုဒူးခေါက်ကွေးမှကိုင်ကာသူဇာ၏ပခုံးဆီသို့ထပ်မံကာတွန်းတင်ပေးလိုက်ပြန်သည်။
(၁၀) ချက်လောက်ဆောင့်ပြီးသွားbnသောအခါတွင် ဦးမောင်ကြီး ၏ဆောင့်ချက်များမှ အားမပါတော့ဘဲ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်လျော့လာသည်။ ဦးမောင်ကြီး ပြီးခါနီးပြီဆိုသည်ကိုလှလှမွန်တစ်ယောက်နားလည်လိုက်သည်။ သို့သော်သူမအဖို့မှာကားအခုမှအရှိန်ကောင်းပြီးအရသာတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ * အင်း ဟင်း .. အ အ ကို ကြီ .. ထိန်းထား ဦး … ကျ ကျ မ နည်းနည်း လိုသေးတယ် .. * *အင်း အို့ ဟား … တောင့်ထားဦး .. ဘွတ် .. ပလစ်တစ်တစ် … ဖေါင်း ဒုတ် .. အို .. စွိ ပလွတ် … အို .. အကိုကြီး ရယ် .. အို အို .. ဟွန်း* ဦးမောင်ကြီး ၏လီးတန်ကြီး သည် သူမ၏စောက်ခေါင်းလေးထဲတွင် တဆတ်ဆတ် တငေါက်ငေါက်ဖြစ်ကာ သုတ်ရည်များကို ငေါ့ငေါ့ကနဲပန်းထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ လှလှမွန် ၏မှိတ်ထားသောမျက်ခမ်းစပ်များတွင်မျက်ရည်လေးများစိမ့်ကာထွက်လာကြသည်။ သို့သော် အပေါ် မှ ဦးမောင်ကြီး အဖို့မူ ထိုမျက်ရည်များကိုမမြင်နိူင်ဘဲ တရှုးရှုးတရှဲရှဲ ဖြင့် ဖါးဖိုကြီးကဲသို့ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ကြိုးစားကာ အသက်ရှုနေရလေသည်။ လှလှမွန် ကတော့ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးပေါ် တွင် မှောက်ချထားပြီး မှိန်းနေသော ဦးမောင်ကြီး ၏ကိုယ်လုံးကြီးအားတင်းကြပ်စွာ ဖက်ပေးထားရင်း သူမ၏ လက်ဖ၀ါးနုနုလေးက ဦးမောင်ကြီး ၏ကျောပြင်ကြီးပေါ် တွင် ရွေ့ကာလျားကာဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။ ဦးမောင်ကြီး သည်ခဏမျှ လှလှမွန် ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုဖက်ကာ ဇိမ်ယူနေပြီးနောက် ပျော့ခွေသွားပြီဖြစ်သော သူ၏လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်ကာ သူမ၏ဘေးဖက်သို့ ပက်လက်လှန်ကာလှဲချလိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ခြေရင်းဖက်ရှိ သူ၏ပုဆိုးနှင့်အင်္ကျီကို ဆွဲ၍၀တ်လိုက်ပြီးနောက် မွှေ့ယာပေါ် သို့ပြန်လှဲကာထိုးအိပ်လေတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် လှလှမွန် မှာ သူမ၏ မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုပိတ်၍ထားပြီး သူမ၏လက်ချောင်းများကို ကော့ချည်၊ကွေးချည်၊ဆန့်ချည်ဖြင့်ဆန့်တငန့်ငန့်ဖြစ်ကာနေလေသည်။ဦးမောင်ကြီး နှင့် သူမတို့ သည်လိုကာမစပ်ယှက်ကြသည့်အခါတိုင်းလိုလိုပင် လှလှမွန် သည် လမ်းတစ်ဝက်တွင်ပင် တို့လို့တန်းလန်းဖြင့်ကျန်ခဲ့ကာ ကာမဆန္ဒမပြည့်ဝဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်ကများပြီဖြစ်သည်။ ဟိုး ညားကာစကတော့ နဲနဲတော်သေးသည်ဟုဆိုသေးသည်။ ဦးမောင်ကြီး သည် သမီးထက်ပင်ငယ်သော ဇနီးချောချောလေး ကို မွှန်ထွန်နေသော ကာမအရှိန်ဖြင့် တစ်ချီမကလိုးခဲ့သည်။ မိန်းမနှင့်ပြတ်နေတာကလဲ ထိုအချိန်က(၂)နှစ်ကျော်ကြာပြီဆိုတော့ဦးမောင်ကြီးများကပြည့်ဖြိုးပြီးသစ်လွင်နေသည်။ ဒီတော့လည်း ဦးမောင်ကြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါခဲ့သည်။
လှလှမွန် အနေနှင့်လည်း ဦးမောင်ကြီး ကတစ်ချီပြီးသွားသောလည်း သူမအနေနှင့်ကာမပြီးသေးချေ။ သို့သော် ဦးမောင်ကြီး ဒုတိယအချီ လိုးသောအခါတွင် သူမ၏ဆန္ဒတို့ အထွတ်အထိပ်ရောက်ကာ ပြီးခဲ့ရသည်။ သည်လို ကာလများကတော့ သိပ်ပြီးကြာရှည်မခံခဲ့ပါ၊ (၂) လ လောက်မမျှသာဖြစ်သည်။ သည့်နောက်ပိုင်းတွင်တော့ ဦးမောင်ကြီး သည် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခါလောက်သာလိုးနိူင်တော့သည်။ ဒီတော့ အသက်(၂၂)နှစ်သာရှိသေးသော ငယ်ရွယ်နုပျိုကာ သွေးသားဆူဖြိုးသော လှလှမွန် သည် သူမဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ရသည့်ကာမဝေဒနာကို ကျိတ်မှိတ်မျိုသိပ်ကာ ခံစားနေခဲ့ရသည်။ ခုလည်း ဦးမောင်ကြီး သည် တခေါခေါဖြင့် သူမ၏ဘေးတွင်အိပ်မောကျနေပြီဖြစ်သည်။ လှလှမွန် သည် ကုတင်ပေါ် မှလူးလဲထကာ ကုတင်ခြေရင်းရှိ သူမ၏ ထမီကိုကောက်စွပ်ပြီးတော့ရင်လျှားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမကိုယ်ကို သန့်စင်ရန် နောက်ဖက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။ လာရင်းနှင့် ထွန်းကျော် ၏ အိပ်ခန်းကိုကျော်သွားပြီးမှတဖန်ပြန်လှည့်ကာအိပ်ခန်းတံခါးကိုအသာတွန်းလိုက်သည်။ အထဲက ဂျက်ချထားသည်ကိုသိလိုက်ရသဖြင့် ပြန်လှည့်ကာ အထွက်တွင်တော့ ထွန်းကျော် ၏ဟောက်သံများက သူမကို ကျီစယ်နေသလိုလို။ ဦးမောင်ကြီး သည်မနက်စောစောရထားဖြင့် တောင်ငူသို့ ခရီးထွက်သားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထွန်းကျော် သည် တစ်နေကုန်ပင် အလုံသစ်စက်တွင် လှလှမွန် နှင့်အတူရှိနေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကူညီကာနေလေသည်။ ဒါပေမဲ့ ထွန်းကျော် ၏စိတ်ကတော့မပြောင်း၊ သူ၏စိတ်များကား လှလှမွန် ထံတွင်သာရှိနေသည်။ စိတ်ထင်လို့ပဲလားတော့မသိ၊ ဒီနေ့ သူ့ ကို လှလှမွန် ဆက်ဆံပုံသည် ပိုမိုပွင့်လင်းကာ ရဲတင်းနေသလိုလို။ ထွန်းကျော် တွေးနေမိသည်မှာ မနေ့ကထမင်းစားခန်းထဲတွင် လှလှမွန် ကိုအပီအပြင် ကိုင်ပြီး နမ်းခဲ့သော်လည်း လှလှမွန် သည်အကျောက်အကန်ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် လုပ်လျှင်ရနိူင်သည်ဟု။ သို့သော် ထွန်းကျော် အတွေးအာရုံများက သင့်တော်ခြင်း ရှိ် မရှိ ကို စဉ်းစားကာ တွေဝေနေစဉ် … *အကို ထွန်းကျော် * *.. ဟင် .. * ထွန်းကျော် သည် အရှည်ပေ(၂၀)ခန့်စီရှိ သစ်ခွဲသားပုံကြားတွင် ခွဲသားဆိုဒ်များကို အကြမ်းအဖျင်းတွက်နေစဉ်တွင် ခေါ်သံ ကြားသဖြင့် လှည့်အကြည့်တွင် သူ့နောက်နားတွင် ပြုံးပြုံးလေးရပ်နေသော လှလှမွန် ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ စောစောကတင် သူမအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတုန်းရှိသေးအခုချက်ချင်းဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်သူ့ရှေ့သို့ လှလှမွန် ရောက်လာချေပြီ။ ထွန်းကျော် သည်ဘေးတစ်ဝိုက်ကို မျက်စိဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ခြားမည်သူ့ကိုမျှမတွေ့ရ။ ထို့အပြင် မြင့်မားလှသောသစ်ခွဲသားပုံကြီးကသူတို့နှစ်ဦးအားလွှမ်းခြုံပေးထားသလိုတောင်ဖြစ်နေသေး သည်။ ထွန်းကျော် သည် ဘာကိုမှစဉ်းစားမနေတော့ပါ၊ .. လှလှမွန်၏ကိုယ်လုံးလေးကိုဆတ်ကနဲသူ့ရင်ခွင်အတွင်းသို့ရောက်အောင်ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးနောက် သူမမျက်နှာအနှံ့ အငမ်းမရနမ်းလေတော့သည်။ လှလှမွန် ကလည်း မျက်လွှာလေးချရင်း သူမ၏မျက်နှာလေးကို အလိုက်သင့်မော့ပေးထားလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် မျက်နှာမှသည် တစ်ဆင့်တက်ကာ လုံးလုံးဖူးကာ အာနေသော လှလှမွန် ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်ပြီးနမ်းလေတော့သည်။ လှလှမွန် ၏ ကိုယ်လုံးလေးသည် တစ်ချက်မျှတွန့်တက်သွားပြီးနောက် ထွန်းကျော် ၏ကိုယ်လုံးကြီးအား တင်းကြပ်စွာပွေ့ဖက်လိုက်သည်။ တစ်ခဏအတွင်းမှာပင် လှလှမွန် ၏တုန့်ပြန်သောအနမ်းများက ထွန်းကျော် ၏နှုတ်ခမ်းများဆီသို့ ကျရောက်လာသည်။ တစ်ဖြေးဖြေးနှင့် သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးသားများသည် တရှိန်းရှိန်း တဖိန်းဖိန်းဖြစ်ကာ ထကြွလာနေပြီဖြစ်သည်။ အတန်ကြာသည့် အနမ်းသံသရာအဆုံးဝယ် ထွန်းကျော် သည် စုပ်နမ်းနေသောသူ့နှုတ်ခမ်းများကိုခွါလိုက်ပြီးနောက်နောက်သို့ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်လိုက်လေသည်။
လှလှမွန် သည် နားလည်ရခက်စွာဖြင့် သူမ၏လက်များကို ထွန်းကျော် ၏ကိုယ်ပေါ် မှဖယ်ခွါလိုက်ရသည်။ ထို့နောက် ထွန်းကျော် ၏ညာဖက်ဖက်သည် လှလှမွန် ၏ပေါင်ရင်းဆီသို့ လှမ်းလိုက်သောအခါတွင်မှ လှလှမွန် သည် ကသောကမျော မျက်လွှာချလိုက်ပြီး ကျေနပ်ပြုံးလေးတစ်ပွင့် သူမမျက်နှာပေါ် တွင် ပေါ် လာလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် သူ့လက်ဖ၀ါးဖြင့် လှလှမွန် ၏စောက်ဖုတ်ကိုထိကပ်လိုက်သည်။ လှလှမွန် ၏ခါးသည် ဆတ်ကနဲတွန့်သွားရာ စောက်ဖုတ် နှင့်လက်ဖ၀ါးသည် ယခုအခါ ပီပီပြင်ပြင်ကြီးကိုထိကပ်မိတော့သည်။ ထမီအပေါ်မှကိုင်ရသည်ဖြစ်သော်လည်း အလွန်တစ်ရာမှပင် နူးညံ့ကာအိဖေါင်းနေသော စောက်ပတ်ကြီးကြောင့် လှလှမွန် စိတ်ပါနေပြီဆိုသည်ကို ထွန်းကျော် သိလိုက်သည်။ ထွန်းကျော်သည် သူ့လက်ဖြင့် ဖွဖွလေး ဆုပ်လိုက်နယ်လိုက် ကလိပေးနေတော့သည်။ လှလှမွန် ၏ကိုယ်လုံးလေး သည် တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်သွားရသဖြင့် ထွန်းကျော် သည်သူ၏ဘယ်လက်ဖြင့်လှလှမွန်၏ပခုံးလေးအားငြင်သာစွာဖက်ပြီးထိန်းပေးလိုက်သည်။ ထွန်းကျော် ၏လက်များသည် သူမ၏စောက်ဖုတ်အား ဆုတ်နယ်ဖျစ်ညှစ်ရုံသာမကသူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့လက်ဖျားထိုးသွင်းကာ ရှေ့တိုးနောက်ငင် ပွတ်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ လှလှမွန် ပေါင်နှစ်လုံး သည် တဖြည်းဖြည်း ဟ သည်ထက် ဟ လာနေပြီး သူမ၏အဖုတ်ကို သိသိသာသာပင် ထွန်းကျော် ၏လက်ဆီသို့ဖိကပ်ပေးထားသည်။ လှလှမွန် သည် ဟင်း ကနဲ သက်ပြင်းကို တိုးတိုးလေးချလိုက်ပြီးနောက် အကို ထွန်းကျော် လူတွေမြင်ကုန်ဦးမယ်နော်ဟုတိုးတိုးလေးသတိပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် လှလှမွန် ဘေးဘီအားအတန်ကြာအောင် အကဲခတ်လိုက်ပြီး ထွန်းကျော် ၏ကိုယ်ကိုလှမ်းကာဖက်လိုက်ပြီး သူမမေးစေ့လေးကို ထွန်းကျော် ၏ပခုံးထက်တွင်မှေးကာ မျက်လုံးများကို စုံမှိတ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် စောင့်နေလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် လှလှမွန် ၏ထမီလေးကို တဖြည်းဖြည်းချင်းမတင်လာရာ ဖြူဖွေးအုနေသော သလုံးသား၊ ဖြောင့်စင်းကျစ်လစ်သော ပေါင်တံ တို့မှာ ၀င်းဝင်းပပ ပေါ် ထွက်လာလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် လှလှမွန် ၏ထမီကို ခါးသို့ရောက်သည်အထိ လှန်တင်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါတွင် ပင်တီအနီရောင်လေး သည် ဖြူသောအသားနှင့်ဟပ်လျက် ကားစွင့်တင်းအိသော တင်သားတို့ကိုမလုံတလုံသာဖုံးနိူင်လေသည်။ ထွန်းကျော် ၏လက်တို့သည်လျင်မြန်စွာပင် လှလှမွန် ၏ဖင်သားကြီးများကို ပင်တီပေါ် မှနေကာ ပွတ်နယ်ဆုပ်ကိုင်ပေးတော့သည်။ ဖင်သားတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်မရသောကြောင့် ထွန်းကျော် သည် လှလှမွန် ၏ပင်တီများကိုအတွင်းသို့လိပ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါ တွင် လှလှမွန်၏အယ်နေသာဖင်သားတို့မှာဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်နှင့်ထွက်လာလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် တင်းကားကာ အိစက်လှသော လှလှမွန် ၏ဖင်တုံးကြီးများကို အရသာခံကာ ဖြည်းညှင်းစွာပင် ပွတ်တော့သည်။ သူ၏တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော ငပဲ သည်လည်း လှလှမွန် ၏ အဖုတ်အပေါ် နားကို ပင်တီပေါ် မှထောက်မိနေပြီဖြစ်သည်။ ပုဆိုးနှင့်ပင်တီ ခံနေသော်လည်း အားကောင်းမောင်းသန်ဖြစ်သော ငပဲ သည် ငေါ့ကနဲ ငေါ့ကနဲ အတင်းရုန်းနေလေရာ လှလှမွန် အဖို့အကြိုက်တွေူနေရလေသည်။ ထွန်ကျော်သည်သူ၏လက်များကိုတင်သားဆီပေါ်မှအရှေ့ဖက်စောက်ဖုတ်ရှိရာသို့လှမ်းလိုက်သည်။
အရှေ့ဖက်တွင်လည်း ပင်တီကို အတွင်းသို့လိပ်လိုက်ပြန်သည်။ ထွန်းကျော် သည် ပင်တီလိပ်ထားသဖြင့် မပေါ့် တပေါ် ဖြစ်နေသော လှလှမွန် ၏စောက်ဖုတ် ကို လက်ခလယ်ဖြင့် အသာကလိလေသည်။ လှလှမွန် ၏ဒူးများသည် မခိုင်ချင်တော့၊ လူကို မရွ ရွအောင်လုပ်နေသာ ထွန်းကျော် ၏အပွတ်အသပ် အချော့အမြှုများကြောင့် အဖုတ်မှာလည်း စိုစွတ်စွတ်ဖြစ်လာချေပြီ။ အခုချိန် သူမ အလိုလား အတောင့်တဆုံးမှာ ထွန်းကျော် ၏ထောင်မတ်ကာ တုတ်ရှည်နေသော လီး၊ သူမ ၏အဖုတ်အပေါ် ဖက် ကို ပူနွေးစွာဖြင့် ဖိထောက်ထားသော တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေသော လီး၊ သို့သော် မိန်းမသားလည်းဖြစ်သည့်အပြင် ထွန်းကျော် နှင့် အလုပ်ရှင်လို ဖြစ်နေရသည်မို့ ပါးစပ်ကထုတ်မပြောသာပဲ စိတ်ထဲမှသာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေမိရတော့သည်။ .. ဒါပေမဲ့လည်း ထွန်းကျော် သည် သူမ၏စောက်ဖုတ်ကို လက်နှင့် ကလိနေသဖြင့် အထိုက်အလျောက်တော့ အာသာပြေ သလိုဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ထွန်းကျော် ကို ဖိကာမှီလိုက်ရင်း ထွန်းကျော် ၏လက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိူင်ရန် သူမ၏ပေါင်များကို ကွကာကားပေးလိုက်သည်။ ထွန်းကျော် ၏လက်ခလယ်သည် သူမ၏အခေါင်းထဲသို့ဖြည်ညင်းစွာဝင်လာလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် သူ့လက်ကို ထုတ်ချည် သွင်းချည်ဖြင့် လှုပ်ပေးလိုက်သောအခါတွင် အရည်ကြည်တို့သည် စိုစိစိဖြင့် ထွန်းကျော် ၏လက်ခလယ်တွင် ကပ်ပါလာသည်။ ထွန်းကျော်သည်သူ၏လက်မနှင့်စောက်စေ့ကိုရှာလေသည်။ ဘုထနေသော အငုတ်လေးကို တွေ့သောအခါ သူလက်မနှင့်လက်ညှိုးကြားတွင် ထားကာ ဖြည်းညှင်းစွာပွတ်ချေပေးလိုက်သည်။ လှလှမွန်သည်တဆတ်ဆတ်နှင့်တုန်နေပြီး သူမ၏နှုတ်မှလည်း မသဲမကွဲ တီးတိုးရေရွတ်သံများထွက်ပေးနေသည်။ သူမ၏လက်တစ်ဖက် သည် သူမ နှင့် ထွန်းကျော်အကြားတွင်ရှိသော ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးဆီသို့လှမ်းလိုက်လေသည်။ ထွန်းကျော် သည် သူမ၏နူးညံ့လှသော အတွေ့ကို ပုဆိုးခံနေသော်လည်း ကောင်းစွာခံစားလိုက်ရသည်။ လှလှမွန် အဖို့လည်းလီးကြီး၏ပူနွေးနေသောဓါတ်ကိုပုဆိုးပေါ်မှအုပ်ကိုင်ထားရသော်လည်း သိနေသည့်အပြင် သူမလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်လိုက်သောအခါတွင် ငေ့ါကနဲ ငေါ့ကနဲ တောင်ကာနေရာ သူမ၏စိတ်အစုံကိုပိုမိုကြွစေလေသည်။ နှစ်ယောက်သားအခြားတစ်ယောက်၏အင်္ဂါကိုအခြားတစ်ယောက်ကဆွပေးရင်းအရှိန်တော်တော်ရလာနေကြပြီ။ နှစ်ယောက်စလုံး၏အသက်ရှုသံများသည် တရှုးရှုးဖြင့် ပြင်းထန်လာကြသည်။ ထွန်းကျော် သည် သူ့လက်များကို လှလှမွန်ဆီမှ ခဏဖယ်ကာ သူ့လုံချည်ကို ကွင်းလုံးကျွတ်ချွတ်ချရန်အတွက် ခါးပုံစကိုဖြည်ရန်အလုပ် .. *ဆရာထွန်း … ဆရာထွန်း ..*
ခပ်ကျယ်ကျယ်အော်ခေါ် သံတစ်ခုက သစ်ခွဲသားများအပုံတစ်ဖက်မှထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ထွန်းကျော် သည် လုံချည်ကိုပြန်ပြင်ဝတ်လိုက်ပြီး ထောင်မတ်နေသော သူ့ ငပဲ ကိုလည်း ငြိမ်ကျသွားစေရန် အတင်းပင်လက်ဖြင့် ချိုးနှိမ်နေရသည်။ လှလှမွန် သည်လည်း လိပ်နေသော သူမ၏ပင်တီကိုပြန်ပြင်ရန်ပင် အချိန်မရတော့သဖြင့် ခါးအထိလန်တက်နေသော သူမ၏ထမီကို အလျင်အမြန်ပင်ဆွဲချလိုက်သည်။ သူမသည် ကတုံကယင်ဖြစ်ကာ မျက်လုံးအပြုးသားနှင့်ဖြစ်နေလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် အသံခပ်တိုးတိုးဖြင့် * အကို အရင် ထွက်တွေ့လိုက်မယ် .. ဒီမှာပဲနေခဲ့ပြီး အရိပ်အချည်ကြည့်ပြီးမှ ထွက်လာခဲ့နော် …* ထွန်းကျော် သည် သစ်ပုံကြားမှ ထွက်လိုက်သောအခါတွင်သစ်စက်မှအလုပ်သမားလေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ဆရာ .. သစ်ဝယ်မယ့်လူတွေရောက်နေတယ် .. အေး အေး ဟုတ်ပြီ .. သွားကြတာပေါ့ကွာ ..ဟုပြောရင်းဝယ်သူဆီသို့ထွန်းကျော်ထွက်ခဲ့တော့သည်။
ထွန်းကျော် နှင့် လှလှမွန် တို့ ကံဆိုးသည်ဟုပင် ပြောရမည်။ ထိုနေ့ကျမှာပင် ၀ယ်သူများလှသည်။
ထွန်းကျော် အိပ်ယာမှနိူးတော့တစ်အိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။ သူသည် အိပ်ယာမှနိူးနိူးခြင်း ရေချိုးလိုက်လျင်ကောင်းမည်ဟုတွေးကာ အင်္ကျီကိုချွတ်၊သဘက်တစ်ထည်ကိုပုခုံးပေါ်တင်၍အိပ်ခန်းထဲမှထွက်ခဲ့လေသည်။ ရေချိုးခန်းသို့သွားရန် မီးဖိုဆောင်ထဲမှဖြတ်အထွက်တွင် ထွန်းကျော် မီးဖိုဆောင်ထဲသို့ ဝေ့ကာကြည့်လိုက်သော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှမတွေ့ရ။ အေးအေးဆေးဆေးပင် ရေချိုးခန်း သို့ဝင်ကာ ရေကိုတစ်ဝကြီးချိုးလိုက်သည်။ ရေချိုးပြီးနောက်ထွန်းကျော်သည်သူ့အိပ်ခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်ကာအ၀တ်အစားလဲလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူဒီအိမ်ကိုရောက်တိုင်း လုပ်နေကျဖြစ်သည့် ထမင်းစားခန်းဆီသို့ထွက်လာခဲ့သည်။ မည်သူ့ကိုမျှမတွေ့ရပေမယ့် သူအတွက်စားစရာတစ်ခုခုတော့စီစဉ်ထားမြဲဖြစ်သည်။သူထမင်းစားခန်းအတွင်းသို့လှမ်းအ၀င်လိုက်တွင် ထမင်းစား စားပွဲဘေးတွင်ရပ်နေသော လှလှမွန် က ထွန်းကျော် ၀င်လာရာဖက်သို့ လှည့်ကြည့်ကာ သူ့ကိုပြုံးပြလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏မျက်နှာလေးသည် တစ်ဖက်သို့ပြန်လှည့်ကာသွားလေသည်။ ထွန်းကျော်ကိုနောက်ကျောပေးကာရပ်နေသောလှလှမွန်၏နောက်ကျောပြင်အလှသည် နံက်အိပ်ယာမှနိူးစ လန်းဆန်းကာနေသော သူ့သွေးသားများကို သွက်လက်စွာလှုပ်ရှားစေသည်။ ထွန်းကျော် သည် သူမ၏နောက်ဖက်(၄)(၅) ပေအကွာသို့ အရောက်တွင် ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲ လှလှမွန် ၏နောက်ကျောအလှကိုသာ စူးစူးနစ်နစ် ငေးကာကြည့်နေလေသည်။ ကျောလည်လောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ရသော ဆံပင်လေးများကို လှလှမွန် သည် အရင်းမှဆံညှပ်ဖြင့် စုကာစည်းထားလေသည်။
ထို့ကြောင့် ဖွေးကာနုနေသော ဂုတ်ပိုးလေသည် ဆံနွယ်စလေးများဖြင့် မချင့်မရဲဖြစ်စရာကောင်းလောက်အောင်လှနေလေသည်။ ထို့ပြင်လည်း သူမ၀တ်ထားသော နက်ပြာရောင် အင်္ကျီလက်ပြတ် ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ လက်ပေါက်အနားစလေးများဆီမှ သူမ၏ပုခုံးသားနှစ်ဖက်သည် ၀င်းဝါကာ ပြည့်ပြည့်ဖေါင်းဖေါင်းလေးဖြစ်နေသည်။ပုခုံးစွန်းဆီမှသည်အိအိဖေါင်းဖေါင်းလေးဖြစ်ကာသွယ်ဆင်းသွားသောသူမ၏၀င်းဝါသောလက်မောင်းသားများပေါ်တွင်လိမ်းထားသောသနပ်ခါးအစင်းလေးတွေမှာတစ်ဝက်တစ်ပျက်ပေါ် လွင်နေသည်။ တစ်ထွာမျှလောက်သာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော လှလှမွန် ၏ခါးသေးသေးလေးသည် နွဲ့နှောင်း၍နေပြီး အပြာရင့်ရောင်အောင်ခံပေါ် တွင် အ၀ါနှင့်အစိမ်းနုရောင်အပွင့်စက်လေးများပုံဖေါ်ထသားသောထမီလေး၏အောက်မှ ဖေါင်းတင်း၍နေသော သူမ၏တင်ပါးသားကြီးများမှာ လုံးတစ်လှပလွန်းလေသည်။ထွန်းကျော်သည်ခပ်မြှင်းမြှင်းလေးသက်ပျင်းချလိုက်လေသည်။သူရပ်ကာကြည့်နေသည်ကိုလှလှမွန်သည်မသိပဲနေမည်မဟုတ်၊ သို့သော် မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာနေခြင်းဖြစ်မည်ဟု ထွန်းကျော် တွေးလိုက်သည်။ ထွန်းကျော် သည် လှလှမွန် ၏နောက်ဖက်ဆီသို့ ခြေလှမ်းနှစ်လှမ်းခန့်အသာလှမ်းလိုက်သည်။ လှလှမွန် ဆီမှပျံ့လွှင့်လာသော မွှေးရနံ့များသည် သူ၏ဘ၀င်ကို ဆွဲလှုပ်သကဲသို့ရှိနေလေသည်။ ထွန်းကျော် သည် လှလှမွန် ၏နောက်ဖက်သို့ ပိုမိုကာ တိုးကပ်လိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ထွန်းကျော် ၏ ဆီးစပ်နှင့် တင်းကားနေသော လှလှမွန် ၏ ဖင်သားကြီးတို့မှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထိလုမခန်း နီးကပ်သွားချေလေပြီ။ ပြူတင်းပေါက်မှ တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်းလာသော လေပြည်လေအေးလေးသည် ထမင်းစားခန်းဆီသို့ဖြတ်သန်း၍၀င်ရောက်လာသည်။ လှလှမွန် ၏နုညက်ကာဝင်းနေသောဂုတ်သားလေးပေါ်မှတွန့်တွန့်ခွေခွေလေးဖြစ်နေသော ဆံနွယ်များသည် ဘယ်ညာယိမ်းထိုး၍လူးလိမ့်ကာသွားကြသည်။ ထွန်းကျော်၏လက်နှစ်ဖက်သည်မြောက်ကာတက်လာပြီးအိဖေါင်းကာနေသော လှလှမွန် ၏ ပုခုံးစွန်းနှစ်ဖက်ကို မရဲတရဲ နှင့် သွေးတိုးစမ်းသလို ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်လိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်လေးမှာပင် လှလှမွန် သည် သူမ၏ခါးလေးကို အနည်းငယ် ညွှတ်လိုက်ပြီး ရှေ့စားပွဲပေါ်မှကော်ဖီကရားကို လှမ်းယူလိုက်သောအခါတွင်သူမ၏လုံးလုံးတစ်တစ်ဖင်သားကြီးများသည်ထွန်းကျော်၏ပေါင်ရင်းဂွဆုံကိုဖြတ်ကနဲဖိကပ်မိလေသည်။ပြီးနောက် ကော်ဖီကရား လက်တွင်းသို့ရောက်သည်နှင့်သူမ၏ခါးကိုပြန်ဆန့်လိုက်ရာ လှလှမွန် ၏တင်သားကြီးများနှင့် ထွန်းကျော် ၏ပေါင်ရင်းသို့သည် ခဏမျှကင်းကွာတော့မလိုဖြစ်သွားသော်လည်း ထွန်းကျော် ၏ခါးက အသာကော့ကာလိုက်သွားသဖြင့်စောစောကလိုပင်ဖိကပ်နေသည့်အနေအထားအတိုင်း မပျက်မယွင်းရှိနေလေသည်။ လှလှမွန်သည်လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော ကော်ဖီကရားထဲရှိ ကော်ဖီများကို စားပွဲပေါ် တွင်ရှိသော ကော်ဖီပန်းကန်ထဲသို့ ထည့်လိုက်သည်။ ကရား ကိုကိုင်ထားသော လှလှမွန် ၏လက်များသည်တုန်ယင်လျက်။ ထွန်းကျော် ၏နှာခေါင်းပေါက်မှ ရှုးကနဲရှုးကနဲ ထွက်လာသော လေများ သည် လှလှမွန် ၏ဂုတ်သားနုနုလေးပေါ် သို့ လာ၍ ထိနေကြသည်။ ပြီးတော့သံချောင်းတစ်ချောင်းကဲ့သို့ မာတောင်နေပြီဖြစ်သော ပေါင်ကြားမှ သူ့လီးတန်ကြီး က ပုဆိုးတွင်းမှနေပြီး လုံးတစ်ကာဖေါင်းကြွနေသော လှလှမွန် ၏ ဖင်သားကြီးများကို ဖိကပ်ထိနေပြီဖြစ်သည်။
*ကိုထွန်းကျော် … ကော်ဖီသောက်တော့လေ ..* လှလှမွန် သည် အသံကိုထိန်းပြီးပြောသော်လည်း ခပ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သော သူမ၏အသံလေးအဆုံးတွင်လှုပ်ခါ ၍နေသည်။ ထိုသို့ပြောရင်း လှလှမွန် သည် သူမ၏ကိုယ်ကို ဖြတ်ကနဲလှည့်လိုက်ရာ ထွန်းကျော် ၏ရင်ခွင်အတွင်းသို့လုံးလုံးလျားလျား ရောက်ရှိသွားလေသည်။ သူ့ကိုသူ သတိမထားမိလိုက်စဉ်မှာပင် ထွန်းကျော် သည် လှလှမွန် ၏ပါးဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ရွှတ်ကနဲနေအောင်နမ်းလိုက်သည်။ *အို .. ကိုထွန်းကျော်* .. လှလှမွန် သည် တုန်လှုပ်စွာရေရွတ်လိုက်ရင်း သူမ ၏ကိုယ်လုံးလေးကို လူးလူးလွန့်လွန့် တိုးထွက်လိုက်သောအခါ ထွန်းကျော် ၏လက်နှစ်ဖက်ကလည်း သူမကိုလွှတ်ပေးလိုက်မိလေသည်။ ထွန်းကျော် ၏ရင်ခွင်အတွင်းမှ လွတ်မြောက်သွားသည်နှင့် မြီးကောင်ပေါက်မလေးသဖွယ် အပြေးတစ်ပိုင်းဖြင့်ထွက်သွားသော လှလှမွန် ၏ တုန်ခါ ၍သွားကြသော တင်သားဆိုင်ကြီးတွေကို မျက်စိကျွတ်ကျမတတ် ကြည့်ရင်း ထွန်းကျော် သည် ကုလားထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ကာ သက်ပြင်းအခါခါ ချနေမိတော့သည်။ လှလှမွန် သည် အသက်(၂၂)ှနှစ်မျှသာရှိသေးသည်။ ပြီးတော့ ထွန်းကျော် ၏ဆရာဦးမောင်ကြီး ၏ ဒုတိယဇနီးလည်းဖြစ်သည်။ ဦးမောင်ကြီး ၏ပထမဇနီးဒေါ်ငွေသိန်းမှာလွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်ခန့်ကပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဦးမောင်ကြီး သည် သစ်ကုန်သည် သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသက်(၅၅)နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဒေါ်ငွေသိန်း နှင့် မွေးဖွါးခဲ့သော သမီးတစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက် ရှိပြီး သမီကြီးဖြစ်သူ ခင်ခင်စိန် သည် အသက်(၃၃) နှစ်ခန့်ရှိ အပျိုကြီးဖြစ်ပြီး၊ ကျောင်းဆရာမ အလုပ် လုပ်ကာ ဖခင်ဖြစ်သူ၏အိမ်တွင်အတူနေလေသည်။ သားဖြစ်သူ ခင်ဇော် သည် အသက်(၂၉) နှစ်ခန့်ရှိ အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်ပြီး အိမ်ခွဲကာနေသည်။ ထွန်းကျော် သည် လွန်ခဲ့သော (၁၀)နှစ်ခန့်က ဦးမောင်ကြီး ၏သစ်စက်တွင် သစ်စက်စာရေး ၀င်လုပ်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါဆိုလျှင် ဦးမောင်ကြီး ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာသည် အထိယုံကြည်ကိုးစား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံနေရပြီဖြစ်သည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ထွန်းကျော် အလုပ်ဝင်ပြီး သိပ်မကြာမီတွင် ဦးမောင်ကြီး စီးပွါးတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထွန်းကျော် သည် ပါးရည်နပ်ရည်လည်းရှိ၊ စာရင်းဇယားလည်းနိူင်၊ ဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းသဖြင့် ဦးမောင်ကြီး အဖို့မှာကား ကိုယ်ပွါးတစ်ယောက်ရသကဲသို့ဖြစ်ကာ တစ်ယောက်အားမှသည် နှစ်ယောက်အားဖြစ်လျက်သူ၏လုပ်ငန်းများပိုမိုသွက်လက်အောင်မြင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ထွန်းကျော် ကပင် ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ လူပျိုလူလွတ်လည်းဖြစ်ပြန်တော့ တောင်ငူသစ်စက်ထဲတွင်သာပျဉ်ထောင်အိမ် အသေးတစ်လုံးဆောက်ကာ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ယခု တောင်ငူ မှသစ်များကို ရန်ကုန်သို့ လာပို့ရင်း ဦးမောင်ကြီး ၏အိမ်တွင်တည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်ကျော်ခန့်က အလုံရှိသစ်စက်တွင် စာရေးမတစ်ဦးလိုအပ်လျက်ရှိသဖြင့် ထွန်းကျော် သည် သူနှင့်သိကျွမ်းသော လှလှမွန် နှင့်စကားစပ်မိရာမှ သူမကလဲ အလုပ်လိုချင်သည်ဆိုသဖြင့် ဦးမောင်ကြီး ၏သစ်စက်တွင် အလုပ်သွင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ဦးမောင်ကြီး သည် လှလှမွန် နှင့် အနေနီးစပ်ကာ တစ်ပင်လဲမူ တစ်ပင်ထူ ဆိုသည့်စကားအတိုင်း လှလှမွန် ကိုလက်ထပ်ကာယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သားနှင့် သမီးဖြစ်သူကလည်း ကန့်ကွက်ခြင်းအလျင်းမရှိဘဲ လှလှမွန် ကိုကြည်ဖြူစွာပင်လက်ခံခဲ့သည်။ ထွန်းကျော်သည်ဦးမောင်ကြီး၏အလုပ်ကိစ္စများကိုသစ္စာရှိရှိကြိုးပန်းကာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုသိသည့်အတွက်ဦးမောင်ကြီးကလည်းထွန်းကျော်ကိုမြှေက်စားကာမိသားစုဝင်တစ်ဦးကဲသို့ပင်လက်ခံဆက်ဆံခဲ့သည်။
အိမ်ရှေ့တွင်ထိုးရပ်လိုက်သော ကားသံကြောင့် အတွေးနယ်ချဲ့နေသော ထွန်းကျော် သည် သူထိုင်နေသော ဆက်တီကုလားထိုင်မှထကာ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ဆီသို့သွားကာ သံဘာဂျာတံခါးကိုဖွင့်လိုက်လေသည်။ ဦးမောင်ကြီး သည်ကားထဲမှထွက်လာသောအခါတွင် ထွန်းကျော် ၏အနောက်နားတွင် ဘယ်အချိန်ကရောက်နေသည်မသိသော လှလှမွန် သည် ထွန်းကျော် အားဖြတ်ကျော်လျက် ဦးမောင်ကြီး ၏လက်တွင်းမှ အိတ်ကိုသွားယူလိုက်လေသည်။ ထိုအခိုက်မှာပင် ဦးဦးကျော် ဟူသောကလေးအသံလေးကိုကြားလိုက်သဖြင့် လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ ခင်ဇော်၏(၄)နှစ်သမီး မျိုးမျိုးဇော် ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့် ကလေးမထံလျှောက်သွားလိုက်လေသည်။ မျိုးမျိုးဇော် သည် ကားပေါ် မှခုန်ဆင်းလိုက်သည်။ * သမီး ကတစ်ယောက်တည်းလာတာလား .. မေမေ လည်းပါတယ် .. ဦးဦးကျော် ရဲ့ .* . ကလေး ၏စကားကြောင့် ထွန်းကျော် လှမ်းကြည့်လိုက်စဉ်မှာပင် ခင်ဇော် ၏ဇနီး သူဇာ သည် ပစ္စည်းတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ဖြင့် ကားပေါ် မှဆင်းလာလေသည်။ ကိုထွန်းကျော် ရေ .. ၀ိုင်းကူယူပေးပါဦး .. ထွန်းကျော် သည် သူဇာပွေ့လာသော ပစ္စည်းထုတ်များကိုလှမ်းကာယူလိုက်သည်။ ဦးဦးကျော် မျိုးမျိုးဇော် ၏ခေါ် သံကြောင့် သူမဖက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သောကြောင့် ထွန်းကျော် ၏လက်များသည် ပစ္စည်းများကိုလှမ်းပွေ့ပိုက်ယူလိုက်ရင်း သူဇာ ၏ရင်သားနှစ်မွှာကိုလည်းမတော်တဆပင်ကျကျနနကြီးဆုပ်ကိုင်မိလေသည်။ *ဘာလဲ .. သမီးရဲ့ .. သမီးကို ကန်တော်ကြီး လိုက်ပို့ရမယ်နော် .**. အေးပါ .. သမီးရဲ့ ..* ထွန်းကျော် က သူဇာ ဆီမှ ပစ္စည်းများကို ပိုင်ပိုင်နိူင်နိူင် ပွေ့လိုက်ပြီးနောက်သူဇာ၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ကာအကဲခတ်လိုက်လေသည်။ သူဇာ ၏မျက်နှာလေးသည် သိသိသာသာကိုပင် ပန်းနုရောင် သန်းနေလေသည်။ ထို့ကြောင့် သူမ အာရုံပြောင်းသွားစေရန် ထွန်းကျော် က ကိုခင်ဇော် ရော မပါဖူးလား သူဇာမပါလာဘူးကိုထွန်းကျော်အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ မန္တလေးဖက်ကိုခရီးထွက်သွားတာ (၁၅) ရက်လောက်ရှိနေပြီ။ အိမ်မှာလည်းသားအမိနှစ်ယောက်တည်းပျင်းနေတုန်းဖေဖေကလည်းဒီနေ့ရောက်လာတာနဲ့ အတော်ပဲဆိုပြီးလိုက်လာကြတာ … သူတို့အိမ်ရှေ့ခန်းသို့လှမ်း၍အ၀င်မှာပင် မောင်ထွန်းကျော် ခင်ဗျာ မင်းရန်ကုန် နေခဲ့လိုက်ဦးကွာ .. ငါမနက်ဖန်ရထားနဲ့ တောင်ငူ သွားလိုက်ဦးမယ်၊ ဟိုကမိတ်ဆွေတွေ ဆွေမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရတာကြာပြီ၊ နောက်ပြီးဘုရားတန်ဆောင်း ဆောက်ပြီးလှူဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြာပြီ။ ငါတစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်တော့ကြာမယ်နဲ့တူတယ်။ မင်းလည်း နားနားနေနေ ဒီမှာနေခဲ့ဦးကွယ်။ ငါ လှလှမွန် ကိုတော့ထားခဲ့မယ် .. ဒါမှ အလုံသစ်စက်မှာ မင်းအဖေါ် ရမှာ .. ဗြုံးကနဲဆိုတော့ မင်းလဲသူရှိနေတော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကွယ် .. ဟုတ်ကဲ့ ပြောပြီးသည်နှင့် ဦးမောင်ကြီး သည်အိမ်အတွင်းဖက်သို့ လှလှမွန် နှင့်အတူဝင်သွားလေသည်။ ည(၁၀)နာရီ မထိုးမီကပင်အိမ်သူအိမ်သားအသီးသီးသည်မိမိတို့၏အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်သွားကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်အိမ်လုံးသည် တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားပြီး ပိတ်ထားသောပြူတင်းပေါက်တံခါးရှိမှန်ချပ်များကိုလေတိုးသည့်အသံများမှလွဲပြီး တိတ်ဆိတ်ကာနေလေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသဘာသ၀တရားနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး လှုပ်ရှားနေသော လူသားနှစ်ဦးကတော့ အိပ်ခန်းကျယ်ကြီးအတွင်းရှိ ဦးမောင်ကြီး နှင့် လှလှမွန်တို့ဖြစ်ကြသည်။
မနက်စောစော ခရီးထွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ဦးမောင်ကြီး သည် ဇနီးချောချောငယ်ငယ်လေး ဖြင့် ချစ်ရည်လူးလျက် ရိက္ခာယူနေသည်။ ဦးမောင်ကြီး နှင့် လှလှမွန် တို့ နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်ပေါ်တွင်အ၀တ်အစားဟူသမျှ ဘာမျှမကပ်ကြပေ၊ ကုတင်ပေါ် တွင်ပက်လက်ဖြစ်နေသော လှလှမွန် ၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကိုယ်လုံးတီးကြီးပေါ် သို့ ဦးမောင်ကြီး ၏ညိုညိုတုတ်တုတ် ကိုယ်လုံးကြီးကမှောက်၍ထားပြီး ခြေထောက်များကား အောက်ကမွှေ့ယာကို အားယူကာ ဖင်ကြီးမြှောက်ကာနှိမ့်ကာဖြင့် အားပါးတရပင်လိုးနေသည်။ *ဘွတ် .. ဗြွတ် .. ပလွတ် .. ပလပ် .. ပြွတ် .. ရှုး အား .. ဟင်း ဟင်း .. အကိုကြီးရယ် ..** ဒီထက်ပိုပြီးဆောင့်ပေးပါဦး .. မပီမသပြောလိုက်သော လှလှမွန်၏စကားအဆုံးတွင်ဦးမောင်ကြီးကခပ်သွက်သွက်ပင်ဆောင့်ကာလိုးပေးလိုက်သည်။ ကျေနပ်အားရဖြစ်သွားရသော လှလှမွန် ၏ကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးက ကော့ကနဲကော့ကနဲ တက်သွားသည်။
ရန်နိုင်တစ်ယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်သောအခါဧည့်ခန်းမှာတံမျက်စည်းလှည်းနေသောအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းနှင့်ပိန်ကပ်ကပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်၍ လှမ်းမေးလိုက်သည် ။ “ ဟိတ်…နင်ဘယ်သူလဲ ” ကောင်မလေးမှာ မျက်လုံးအပြူးနဲ့အလန့်တကြားဖြစ်နေပုံရပြီး ဘာမှပြန်မပြောခင် မမိုးပွင့်ကအိမ်နောက်ဖေးမှထွက်လာပြီး “ အော်…မောင်လေး..ဒီကောင်မလေးက မမတို့အိမ်မှာဝိုင်းကူလုပ်မယ့် အိမ်ကူလေးပါ သူ့နာမည်က သူသူအောင်တဲ့ မမအခုဆယ်တန်းရောက်ပြီဆိုတော့ စာကိုဂရုစိုက်ရအောင် မေမေကခေါ်လိုက်တာပါ ”
“ မေမေတို့ကလဲဗျာ….မခေါ်လဲရသားနဲ့ ရှုပ်ကိုရှုပ်ပါတယ် ”…လို့ပြောပြီးရန်နိုင်တစ်ယောက် အိမ်နောက်ဖေးထဲဝင်ပြီး ထမင်းသွားစားလိုက်တော့သည် ။ စိတ်ထဲမှာလဲ ဘဝင်မကျဖြစ်နေသည် ။ ကောင်မလေးပုံကညစ်စုတ်စုတ် ပိန်ကပ်ကပ်နဲ့ သူချက်တဲ့ထမင်းဟင်းတွေ စားရမှာလဲ ရွံ့နေမိသည် ။
မမိုးပွင့်မှာရန်နိုင်ထက်၂နှစ်ကြီးပြီး မောင်နှမနှစ်ဦးသာရှိသည်။ မိဘဖြစ်သူမှာ ဈေးထဲတွင်အထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး မိုးချုပ်မှသာပြန်လာကြသောကြောင့် အားလပ်ချိန်သိပ်မရှိ၍အိမ်တွင်အကူရရန်အိမ်ဖော်တစ်ဦးအားခေါ်ယူလိုက်သည် ။ ရန်နိုင်မှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်သည့်အလျှောက်ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးနေတော့သည် ဒီလိုနှင့်အချိန်တွေပြောင်းလဲလာလိုက်တာ သူသူအောင်တစ်ယောက် ရန်နိုင်တို့အိမ်ရောက်လာတာနှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပေပြီ ။ မမိုးပွင့်တစ်ယောက်လဲ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူကိုဖြစ်လို့ ၊ ရန်နိုင်လဲဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေထားပြီး အားနေတော့ ဂိမ်းကစားလိုက် ၊ အိပ်လိုက်နှင့်ဟန်ကိုကျနေလေ၏ ။အဖေနှင့်အမေတို့က မိုးလင်းသည်နှင့်ဈေးအထည်ဆိုင်သွားကြရသည် ။ ရန်နိုင်စားမေးပွဲဖြေပြီးအားနေတယ်ဆိုတော့ဈေးမှာကူရောင်းဖို့ဘယ်လောက်ပြောပြော ရန်နိုင်တစ်ယောက်မသွားချေ ။ သူငယ်ချင်းတွေနှင့်သာ WOW ဂိမ်းကိုမုန့်ဖိုးရသလောက် သွားကစားနေတော့သည်။
သူသူအောင်မှာလဲ အရင်လိုပိန်ကပ်ကပ်ညစ်ပေပေလေးမဟုတ်တော့ပေ ။ ရန်နိုင့်အစ်မမမိုးပွင့်ပေးသောအဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီးဆံပင်ပုံစံတွေပြောင်းသွားကာ မထင်နိုင်လောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းသွားသည် ။ အပျိုဖော်ဝင်လာသည်မို့အသားတွေကဖွံ့ဖြိုးလာကာထွက်သင့်တဲ့နေရာထွက်လာတာကိုရန်နိုင်တစ်ယောက်သတိထားမိလာသည်။စိတ်တွေလဲဖောက်ပြန်ကာ ပြစ်မှားပြီးသူသူအောင်ကိုမှန်းကာ ဂွင်းထုတတ်လာသည် ။
နံနက်ခင်းဆိုဘယ်တော့မှ စောစောမနိုးတတ်တဲ့ရန်နိုင်အတွက်မုန့်ဖိုးကို အမေကမမိုးပွင့်နဲ့ပေးထားရသည် ။ မမိုးပွင့်ကသူအခန်းထဲက မှန်တင်ခုန်ပေါ်တွင်ရန်နိုင်အတွက်မုန့်ဖိုးကို တင်ထားပေးတတ်သည် ။ ဒီနေ့ရန်နိုင်နိုးလာတော့ မျက်နှာသစ်ရေချိုးပြီး ကိုယ်သုတ်နေရင်း မုန့်ဖိုးယူရန်မမိုးပွင့်အခန်းသို့လျှောက်လာသောအခါ အခန်းထဲမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသော သူသူအောင်တစ်ယောက်ဘော်လီထဲသို့ တစ်စုံတစ်ခုဖွက်လိုက်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။မုန်တင်ခုန်ပေါ်ကြည့်သောအခါ သူ့အတွက်မုန့်ဖိုးရှိမနေချေ ။ ရန်နိုင်တစ်ယောက်သိလိုက်ပြီ ခဏကသူသူအောင်ဘော်လီထဲဖွက်လိုက်တာ သူ့မုန့်ဖိုးပဲဖြစ်မှာဆိုတာကိုပင်
ဒေါသလဲတော်တော်လေး ထွက်သွားသည် ။ နောက်မှအတွေးဝင်လာပြီး သူသူအောင်ကိုနိုင်ကွက်ရပြီဆိုတာသိလိုက်သည်နှင့်သူသူအောင်ကိုစမေးလိုက်သည် ။
“ သူသူ…ခဏကနင်ဘာဖွက်လိုက်တာလဲ…ငါသိတယ်နော် ”
“ ဟင်…ဘာလဲ ကိုနိုင်ကလဲ ဒီမှာ သူသူသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ဟာကို ဘာကိုဖွက်ရမှာလဲ ”
“ အေးလေ…နင်က ဝန်မခံဘူးဆိုတော့ ငါရှာရမှာလားပြောစမ်း ”
“ ရှာလေ…ကိုနိုင့်သဘောပဲ..ကြိုက်သလိုရှာ ” ဟုသူသူအောင်က ခပ်တည်တည်နဲ့ပြန်ပြောလေ၏ ။
“ အိုကေ…ကြိုက်သွားပြီ … ကဲနင့်အကျီ င်္ချွတ်လိုက်စမ်း … သူသူ ”
“ အာ…ကိုနိုင်ကလဲ အဲလိုတော့မလုပ်နဲ့လေ ”
“ နင်ပဲပြောတာ ကြိုက်သလိုရှာဆို …” ပြောပြောဆိုဆို ရန်နိုင်တစ်ယောက်သူသူအောင့်အနား ကပ်သွားပြီး ဝတ်ထားတော့အကျီ င်္ကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်သည် ။ သူသူအောင်တစ်ယောက်ကြိုးစားရုန်းသော်လည်း အင်အားမမျှသောကြောင့် ခဏအကြာတွင် ရှေ့ကြယ်သီးများပြုတ်ထွက်ကုန်သည် ။ သူသူအောင့်မှာ ရှက်စိတ်ကြောင့်မျက်ရည်များကျလာတော့သည် ။
“ ကဲ…နင့်ဟာနင်ချွတ်မလား ငါဆွဲချွတ်ရဦးမလား ” “ ဟုတ်…ချွတ်ပါမယ် ကိုနိုင် ” လို့ပြောပြီး သူသူအောင်ကိုယ်တိုင်ချွတ်လိုက်ရာ အပေါ်ပိုင်းဘော်လီတစ်ထည်နှင့်အောက်ဘက်မှာထမိန်သာရှိတော့သည် ။
“ ကဲ…ကြာတယ် ထမိန်ပါချွတ်လိုက်ဟာ ”
“ အို…ကိုနိုင်ကလဲမဆိုင်တာတွေ ”
“ လုပ်မနေနဲ့ ငါလာဆွဲချွတ်ရဦးမလား ”
“ အဟင့်..ဟင်း….အီး..” သူသူအောင်တစ်ယောက် ငိုကြီးချက်မနဲ့ ထမိန်ကိုဖြေချလိုက်ပြီး ထမိန်မှာခြေရင်းတွင်ပုံနေလေတော့သည် ။ ဘော်လီနှင့်အတွင်းခံဘောင်းဘီသာ ကျန်တော့ရာ ရန်နိုင်တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ပုဆိုးအောက်မှ လီးမှာရန်ထောင်နေသော မြွေဟောက်ပမာ ထောင်းခနဲ တောင်ထလာတော့သည် ။ ထို့နောက်သူသူအောင့်အနားကပ်သွားပြီအတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှအဖုတ်ကိုဆုပ်ကိုင်၍ တစ်ခုခုရှာသလိုလုပ်ရင်း အဖုတ်ကလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ အမွေးစပေါက်စ ကြိုးတိုးကြဲတဲလေးနဲ့ကိုင်ရတာ အတော်လေးကို ရန်နိုင့်အတွက် အရသာထူးနေတော့သည်။
“ နင်ဒီမှာ ဖွက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလား ”
“ အီးဟီးဟီး..မဟုတ်ပါဘူး…ရှာရှာကြိုက်သလောက်ရှာ..အီးဟီးဟီး” သူသူအောင်မှာရှက်လဲရှက် ငိုလဲငိုရင်းပြန်ပြောရှာသည် ။ ရန်နိုင်မှာလဲ ရှာသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့တစ်ခါမှ မကိုင်ဘူးသောစောက်ဖုတ်၏ အိစက်နူးညံ့သော အထိတွေ့ကြောင့် စိတ်ကြိုက်ပွတ်သတ်ပေးနေလိုက်သည်
သူသူအောင်တစ်ယောက်ငိုသာငိုနေရသောလည်းရန်နိုင်၏ပွတ်သတ်မူတွေကြောင့်အဖုတ်တစ်ခုလုံးယားယံလာပြီးသဘာဝတရားအရအဖုတ်ထဲမှအရည်တွေ စီးဆင်းလာတော့သည် ။ သြစာအုပ်တွေဖတ်ဖူးတဲ့ရန်နိုင်တစ်ယောက် သူသူအောင်စိတ်ပါနေပြီဆိုတာသိလိုက်သည် ။
ဒါနဲ့ “အင်းအပေါ်ယံတော့ဘာမှမရှိဘူးဟနင့်အပေါက်ထဲမှာဖွက်ထားသလားမသိပါဘူး”ဆိုပြီးအဖုတ်ကိုပွတ်ပေးနေရာမှရုတ်တရက်အတွင်းခံဘောင်းဘီအစွန်းနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်၍အောက်သို့လိပ်၍ ချွတ်ချလိုက်သည် ။
သူသူအောင်တစ်ယောက်အလန့်တကြားဖြစ်သွားပြီး ပေါင်အလယ်လောက်ထိဆွဲချွတ်နေရသော ဘောင်းဘီကို ငိုနေရာမှ အတင်းပြန်ဆွဲတင်ဖို့ကြိုးစားသည် ။ သို့သော် ရန်နိုင်မှာ သူသူအောင့်လက်ကိုညာလက်ဖြင့် ဆွဲချုပ်လိုက်ရင်း ဘယ်လက်ဖြင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုခြေရင်းထိရောက်အောင်ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ သူသူအောင်မှာ ရှက်စိတ်နဲ့အတူမျက်စိကိုမှိတ်ထားပြီး တက်မတတ်ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေလေတော့သည် ။ ရန်နိုင်မှာမူ လှပသောသူသူအောင့်အဖုတ်လေးကိုကြည့်ရင်း ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေရင်း အစိကလေးကိုလက်မဖြင့်မထိတထိ ပွတ်ပေးလိုက်သည် ။ သူသူအောင်ကိုယ်လုံးလေး တစ်ချက်တွန့်သွားပြီးအောက်သို့ငုံ့ကြည့်လိုက်ချိန် ရန်နိုင်ကဘယ်လက်ဖြင့်ဗိုက်သားကိုပွတ်ပေးလိုက်ပြီးညာဘက်လက်ခလယ်ဖြင့် သူသူအောင့်အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ သူသူအောင်ငိုသံတိတ်သွားပြီး ညဉ်းသံလေးထွက်လာတော့သည် ။
“ အ…အား…နာတယ် ကိုနိုင်…အာ..” ရန်နိုင်မှာ ဖြေဖြေမှန်မှန်ဖြင့် လက်ကိုအသွင်းထုတ်လုပ်နေပြီး ဘက်လက်မက ချက်ပေါက်နားတဝိုက် ပွတ်ပေးနေတော့သည် ။ သူသူအောင့်အဖုတ်မှလဲ အရည်တွေတော်တော်ထွက်ကျလာတော့သည် ။ ရန်နိုင်တစ်ယောက် အစကတည်းကဘော်လီထဲမှာရှိနေတာကို သိနေသည် ။ သို့သော် တိုက်ရိုက်ရှာလိုက်လျှင်မိသွားပြီးတာနဲ့ ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရ ဂွင်ပျက်သွားနိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့် တမင်အဖုတ်ကိုအရင်ရှာလိုက်သည် “ အင်း..ဆောရီးဟာ..ဒီအထဲမှာလဲ ဘာမှမရှိဘူး…ငါကြည့်စရာဆိုလို့နင့်မှာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ် ကဲ…ဘော်လီချွတ်ဟာ ”
“ အာ…ကိုနိုင်ဒီလောက်ဆို တော်ပြီပေါ့ ဘာလဲ…သူသူကို သံသယရှိနေတုန်းလား ” ဟုငိုသံနှင့်ပြောလေ၏ ။ “ ဘာလဲသူသူ…နင်ရှက်နေတာလား ” “ အင်း…ရှက်တာပေါ့” “ ကဲ…ဒီလိုဆိုလဲ တရားမျှတအောင်..ငါလဲချွတ်လိုက်မယ်ဟာ..” ဟုပြောပြီး ရန်နိုင်တစ်ယောက်ရေချိုးပြီးစ ကိုယ်သုတ်နေရာမှ လုံချည်တစ်ထည်သာဝတ်ထားသည်ဖြစ်ရာ ခါးပေါင်စကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်ရာ ထောင်မတ်နေသောလီးကြီးမှာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတော့သည် ။
သူသူအောင်လဲလန့်သွားကာမျက်လုံးများဝိုင်းစက်သွားပြီးလီးကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတော့၏ ။ ရန်နိုင်တစ်ယောက်သူသူအောင့်အနားကပ်သွားရာ လီးကြီးမှာသူသူအောင်၏ဗိုက်ပေါ်သို့ထောက်မိနေပြီးထ်ိပ်တွင်စို့နေသောအရည်များက စီးကပ်ကပ်ဖြင့်သူသူအောင့်ဗိုက်ပေါ်သို့ပေနေတော့သည် ။
သူသူအောင်မှာဘော်လီကျွတ်သွားလျှင် သူဖွက်ထားသော ပိုက်ဆံများထွက်ကျလာမည်သိသောကြောင့် ရုန်းကန်သောလဲ တခဏအတွင်းမှာ ဘော်လီမှာကျွတ်သွားပြီး ပိုက်ဆံများထွက်ကျလာ၏ ။ “ ကဲ…သူသူနင်ဘာငြင်းဦးမလဲ…ဒီပိုက်ဆံတွေကမမငါ့အတွက်ထားခဲ့တဲ့မုန့်ဖိုးတွေ…” “ အီး…ဟီးဟီး….” သူသူအောင်တစ်ယောက် ငိုကြီးချက်မနဲ့ မျက်နှာကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ကာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဘာမှဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲ ငိုနေလေတော့သည် ။ ရန်နိုင်ကသူသူအောင့်အနားကပ်ထိုင်လိုက်ကာလက်မောင်သားလေးကိုပွတ်ရင်း “ သူသူ…နင်ဘာလို့အဲလိုလုပ်ရတာလဲ ” “………..” ဘာမှပြန်မဖြေချေ ။ ရန်နိုင်ကလက်မောင်းသားကို ပွတ်ပေးနေရာမှ နို့ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်ပြီ ညှစ်ကစားကာ “ ဟေ့…သူသူ ငါမေးနေတယ်လေ ဘာလို့အဲလိုလုပ်ရတာလဲ ” “ အီးဟီးဟီ….ဈေးသွားဝယ်ရင်း ဘီးကုပ်လေးလှတာတွေ့လို့ ဝယ်ချင်လို့ပါ အီးဟီး..”
“ ဟာ..ဒါဆိုနင်ငါ့ကို စောစောကပြောရောပေါ့…ကဲဒီပိုက်ဆံကိုယူလိုက်တော့…နောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်ရဘူးနော် ပိုက်ဆံလိုချင်ပြော ” ရန်နိုင်တစ်ယောက်ပြောသာပြောနေတာ လက်ကတော့နို့ကိုဖွဖွလေးညှစ်ပေးနေလေ၏ ။ “ ဟင့်….တကယ်လား ကိုနိုင် ကြီးကြီးတို့ကိုရော…ပြန်တိုင်ဦးမလား ” “ မတိုင်ပါဘူး နောက်တစ်ခါနင်ဒီလို မလုပ်ရင်ပြီးတာပဲ ပိုက်ဆံလိုရင်ငါ့ကိုပြောနော် သူသူ ”
“ ဟုတ်…မလုပ်တော့ပါဘူး ကျေးဇူးပဲကိုနိုင်….” ဟုပြောပြီး သူသူအောင့်မျက်နှာမှာအပြုံးလေးတွေဖူးပွင့်လာကာ ထမိန်ကိုကောက်ယူပြီး ပြန်ဝတ်ရန်လုပ်လိုက်သည် ။ ရန်နိုင်ကသူသူအောင့်လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီး ထမိန်ကိုဆွဲယူကာအခန်းထောင့်သို့ လွင့်ပစ်လိုက်သည် ။ “ ပြန်ဝတ်မနေနဲ့တော့ သူသူ ”
“ ဟမ်…ဘာလုပ်ဦးမလဲ ကိုနိုင်…မကျေနပ်သေးဘူးလား ဘာရှာဦးမလို့လဲ ” “ ဘာမှမရှာပါဘူးဟ…သိပ်လှတဲ့နင့်ကိုယ်လုံးကိုတွေ့ပြီး ငါမနေနိုင်တော့ဘူးဟ ဒီမှာကြည့်ဦး ” လို့ဆိုပြီး ရန်နိုင်တစ်ယောက်သူ့လီးကို ငေါ့ပြလိုက်သည်။သူသူအောင်ကထောင်မတ်နေတော့ရန်နိုင့်လီးကိုကြည့်ရင်း “ အဲဒါဘာဖြစ်နေလို့လဲ…ကိုနိုင် ”
“ တောင်နေတာလေ ထုလိုက်မှအကြောတွေလျော့သွားမယ် …သူသူထုပေးလေ ” ဟုပြောပြီး သူသူအောင့်လက်ကိုကိုင်ကာ လီးပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်တော့သည် ။ သူသူအောင်မှာ လီးကိုကိုင်ထားလျက် ပူနွေးသောအထိအတွေ့နဲ့အတူမှင်သက်ပြီးဆုပ်ကိုင်လျက်လီးကြီးကိုငေးကြည့်နေမိသည် ။
“ ဟဲ့…ထုပေးလေ သူသူ…မလုပ်တတ်ဘူးလား ” “ ဟင့်အင်း..” ရန်နိုင်က သူသူအောင့်လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပြပြီး ဂွင်းထုနည်းကိုသင်ပေးလိုက်သည် ။ အရှိန်ရလာတော့ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး “ အင်း…အဲလိုပုံမှန်လေးလုပ်ပေး…အား…ကောင်းလိုက်တာဟာ ”
ဆိုပြီး သူသူအောင့်နို့တွေကိုပြန်လည် ဖြစ်ညစ်ကစားပေးလိုက်သည် ။ သူသူအောင်မှာလည်း ဂွင်းထုပေးနေရတာဖီးလ်တစ်မျိုးခံစားနေရသလို၊ နို့ကိုဖြစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်ခံရတာတစ်မျိုးဖြင့် အဖုတ်မှ အရည်များစိမ့်ကျလာတော့သည် ။ “ အား…ဟုတ်ပြီး ကောင်းတယ်….မြန်မြန်လေးလုပ်…လုပ်…ပြီးတော့မယ် ”
ရန်နိုင်ကခေါင်းကိုမော့ကပြောလာသဖြင့် သူသူအောင်ခပ်သွပ်သွပ်လေး ဂွင်းဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ရန်နိုင့်ခါးကော့ထိုးလာပြီးလီးထိပ်မှာ သုတ်ရည်ဖြူတွေ တဗြစ်ဗြစ်နဲ့သူသူအောင့်မျက်နှာနဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ ပန်းထွက်ကုန်သည် ။ သုတ်ရည်ကုန်စင်အောင်ထွက်ပြီးတော့မှ ရန်နိုင်တစ်ယောက်သူသူအောင်ကိုဖက်ထားပြီး “ ကောင်းလိုက်တာသူသူရယ်… ” ဟုဆိုပြီး သူသူအောင်ကိုဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းရင်း လက်တွေကမူ သုတ်ရည်များပေကျံနေသော သူသူအောင့်ရင်ဘတ်မှ နို့ပေါ်သို့ပွတ်ကစားနေလိုက်သည် ။
တဖြည်းဖြည်းပွတ်ပေးနေရာက အောက်ဘက်ဆင်းလာပြီးအဖုတ်ပေါ်သို့ ပွတ်ပေးလိုက်ရာ သူသူအောင်တစ်ယောက် ကိုယ်လုံးလေးကော့တက်လာပြီး ရန်နိုင့်လျှာကိုပြန်စုပ်ယူက နမ်းတော့သည် ။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို ပြန်ခွာလိုက်ပြီး သူသူအောင့်နို့တွေကိုစို့ပေးရင်း အဖုတ်ထဲသို့လက်ခလယ် ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည် ။ လက်တစ်ဆစ်မျှ ဝင်သွားသည်နှင့် အဝင်အထွက်ပုံမုန်လေးအတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်သည် ။ အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ တော်တော်များများဆင်းလာ၏ ။
“ အ…အား.ဟင်း ” သူသူအောင့်ဆီမှ ညဉ်းသံများထွက်လာပြီး ရန်နိုင့်ကျောပြင်ကိုပြန်လည်ပွတ်သတ်ပေးနေတော့သည် ။ နို့စို့နေရာမှတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုလျှာနဲ့လျှက်ကာ ဆင်လားပြီး ချက်ပေါက်ထဲသို့လျှာထိုးထည့်ကာ ယက်ပေးလိုက်တော့ သူသူအောင်တစ်ယောက်အော်သံနဲ့အတူ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာသည် ။ အဖုတ်ထဲအဝင်အထွက်လုပ်နေသော လက်ကိုလဲ ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်ရာ သူသူအောင်တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လာပြီး “ အား….ရှီး…အမေ့…အီး….” အဖုတ်မှစောက်ရည်များပန်းထွက်ကာ ငြိမ်ကျသွားတော့သည် ။ ရန်နိုင်
“ အ…အား.ဟင်း ” သူသူအောင့်ဆီမှ ညဉ်းသံများထွက်လာပြီး ရန်နိုင့်ကျောပြင်ကိုပြန်လည်ပွတ်သတ်ပေးနေတော့သည် ။ နို့စို့နေရာမှတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုလျှာနဲ့လျှက်ကာ ဆင်လားပြီး ချက်ပေါက်ထဲသို့လျှာထိုးထည့်ကာ ယက်ပေးလိုက်တော့ သူသူအောင်တစ်ယောက်အော်သံနဲ့အတူ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာသည် ။ အဖုတ်ထဲအဝင်အထွက်လုပ်နေသော လက်ကိုလဲ ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်ရာ သူသူအောင်တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လာပြီး “ အား….ရှီး…အမေ့…အီး….” အဖုတ်မှစောက်ရည်များပန်းထွက်ကာ ငြိမ်ကျသွားတော့သည် ။ ရန်နိုင်ကသူသူအောင်ကိုဖက်ကာ မမိုး၏အိပ်ယာပေါ်သို့ချီမကာ တင်ပေးလိုက်တော့သည် ။
သူသူအောင်တစ်ယောက် မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင်အမောဖြေနေ၏ ။ ရန်နိုင်တစ်ယောက် ယခုမှဗိုက်ဆာလာ၍ နံနက်စာမစားရသေးသည်ကို သတိရကာ ရေချိုးခန်းသို့ပြန်သွားကာ ရေပြန်ချိုးလိုက်ပြီး သူသူအောင်အသင့်လုပ်ပေးထားသော နံနက်စာ ကော်ဖီနှင့်ပေါင်မုန့်ယိုသုပ်ကိုယူကာ မမိုး၏အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာခဲ့သည် ။
“ သူသူ…မောသွားပြီလား ကဲ…ထ ကော်ဖီသောက်ရအောင် ” “ ဟုတ်…ကိုနိုင်…ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲမသိဘူး…မောလိုက်တာ ” “ ခံစားလို့ရော..မကောင်းဘူးလား သူသူ ” “ မသိဘူး..တစ်မျိုးကြီးပဲ…” “ ဟိတ်…သူလေး ရှက်မနေနဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြော ” “ အင်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ် ” ရှက်စနိုးလေးနဲ့ပြောကာ သူသူအောင်ခေါင်းငုံ့လိုက်သည် ။ရန်နိုင်ကသူသူအောင်မေးစေ့ကိုဆွဲကိုင်ကာ ယူဆောင်လာသော ကော်ဖီကိုတိုက်လိုက်သည် ။
“ ဟင့်အင်း…ကိုနိုင်သောက်လေ…” “ သြော်…သူလေးတစ်ငုံသောက်…ပြီးမှကိုနိုင်တစ်ငုံသောက်မယ်လေ ” “ အင်း…” “ ရော့…ပါမုန့်လဲ တစ်ယောက်တဝက်စားမယ်နော် ” “ ကျေးဇူး..” သူသူအောင်မှာရန်နိုင်တစ်ခါမှ ဒီလိုအရောတဝင်မဆက်ဆံဖူးတော့ နေမတတ်ထိုင်မတတ်ဖြစ်နေပြီး ရင်ထဲမှာကြည်နူးနေမိတော့သည် ။ နှစ်ယောက်စလုံးစားသောက်ပြီးကုန်တော့ ရန်နိုင်က သူသူအောင်ကိုဆွဲမကာ “ ကဲ…သူလေးရေသွားချိုးတော့ ” ဟုဆိုကာ ပုခုံးဖက်ကာ နှစ်ဦးစလုံး ကိုယ်လုံးတီးဖြင့်ရေချိုးခန်းဘက်လျှောက်လာခဲ့တော့သည် ။
အဝတ်အစားမရှိပဲ အိမ်ထဲမှာသွားလာနေရတာ သူသူအောင်အတွက်ဖီးလ်တစ်မျိုး ဖြစ်နေတော့သည် ။ ရေချိုးခန်းရှေ့ရောက်သည်နှင့်ရန်နိုင်က “ ကဲ…သူလေး ရေချိုးပြီးရင် ကိုနိုင်အခန်းထဲလာခဲ့နော် ” ပြောပြီးပြန်လှည့်ထွက်သွား၏ ။
သူသူအောင်ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလိမ်းအဝတ်အစားဝတ်ကာ ရန်နိုင်အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်သောအခါ ရန်နိုင်တစ်ယောက် အဝတ်အစားပြန်မဝတ်ရသေးပဲ သူ့လက်တော့ပ်ကွန်ပျူတာဖြင့် အပြာကားတွေကြည့်ပြီးလီးကိုအထက်အောက်ပွတ်သတ်ပေးနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည် ။
“ အို…ကိုနိုင်…ဆောရီးနော် ” “ ကိစ္စမရှိဘူးလာ…သူသူလဲကြည့်ဖူးရအောင် ကိုနိုင့်အခန်းထဲခေါ်လိုက်တာပါ…လာထိုင် ” ပြောပြီးသူသူအောင့်လက်ဆွဲကာ အနားမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဂျပန်မတစ်ဦးက နီဂရိုးရဲ့ လီးကြီးကို မြိန်ရည်ရှက်ရည်နဲ့ စုပ်ပေးနေတာကို သူသူအောင်တစ်ယောက်တွေ့လိုက်သည် ။တစ်ခါမှမကြည့်ဖူးသောကြောင့် သူသူအောင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်နေမိတော့သည် ။ ရန်နိုင်ကသူသူအောင်လက်ကိုဆွဲယူပြီး လီးပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်ရာ သူသူအောင်မှာ အလိုက်သိစွာ အထက်အောက်ပွတ်ပေးနေ၏။ ရန်နိုင့်လက်တွေကလဲ သူသူအောင့်အကျီ င်္အပေါ်မှ နို့လေးကိုဆုပ်ကိုင်ချေမွပြီးနောက် ထမိန်ကိုဖြေချလိုက်ပြီးနောက် သူသူအောင်၏ပေါင်များကို ပွတ်သပ်လိုက် ဆီးခုံမို့မို့လေးကို ပွတ်သပ်လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်သည် ။
အဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြားမှာနစ်မြုတ်နေတဲ့ အစေ့လေးကိုလက်ညိုး၊လက်မဖြင့် အသာအယာပွတ်ချေပေးလိုက်ရာ သူသူအောင်ခမျာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပို၍ဟပေးလိုက်မိပြီး ရန်နိုင်လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးတာရပ်တန့်သွားပြီး တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားမိ၏ ။ ထို့နောက်ရန်နိုင်က သူသူအောင့်ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူသူအောင့်ကို ကုတင်ပေါ်တင်ကာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲဟလိုက်တော့သည် ။ သူသူအောင့်စောက်ဖုတ်မှာ မို့မောက်၍ အမွှေးပါးပါးလေးဖုံးအုပ်ထားပြီး ထိုကြားထဲမှ အစေ့လေးမှာ ငေါက်တောက်တောက်နဲ့ထောင်နေသည်ကိုကြည့်ပြီး ရန်နိုင်လီးထိပ်မှ အရည်တွေစို့လာသောကြောင့် မနေနိုင်တော့ပဲ သူသူအောင့်ပေါင်ကြားထဲဝင်လိုက်ပြီး အဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လီးကိုကိုင်ပြီး အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ရာ အဖုတ်မှအရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတော့သည် ။
“ သူလေး…ဒီလိုလုပ်ပေးတာခံလို့ကောင်းလား ” “ ဟုတ်…တမျိုးကြီးပဲ..အထဲမှာယားသလိုလိုနဲ့ ” “ အင်း….အယားပျောက်အောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့ ” ရန်နိုင်ကစကားမဆုံးမှီသူသူအောင်ဂျိုင်းအောက်မှသူလက်နှစ်ဖက်ကိုလျှိုသွင်းပြီး ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ယူလိုက်ကာ အဖုတ်ဝတွင်ရောက်နေသောသူလီးကြီးကိုတေ့ကာအားနှင့်ဖိဆောင့်ချလိုက်ရာ ဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံး အဖုတ်ကလေးထဲသို့နစ်မြုပ်သွားလေတော့သည် ။
“ ဗြစ်…ဗြစ်..ဗြစ် ” “ အီး…အင့်…” သူသူအောင်၏ အံကြိတ်ညည်းသံနှင့်အတူ ဖင်လည်းပိုမိုကော့တက်လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးလည်းဆတ်ကနဲတုန်သွားသည်။ရန်နိုင့်လက်တွေကိုလဲတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရင်း “ အား..နာတယ်ကိုနိုင်ရယ် ပြန်ထုတ်ပေး…မရဘူး..အီးဟီး ” ..ငိုရင်းပြောနေမိ၏။
“ ခဏလေး … အောင့်ခံပါနော် သူသူ…ခဏပဲ ” လီးထပ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုနှင့်ကာဆီးထားသလိုဖြစ်နေသောကြောင့် ရန်နိုင်အားစိုက်ပြီးဆောင့်ချလိုက်တော့သည် ။ “ အာ့…အား…အောင်မလေး…” “ အပျိုမှေး…ပေါက်သွားတာပါ သူသူ…ခဏကြာရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ….” သူသူအောင်မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များစီးကျနေရင်း အံကြိတ်ပြီခံနေရှာ၏ ။သူသူအောင့်အဖုတ်မှ သွေးအနည်းငယ် စီးကျလာ၏ ။ ရန်နိုင်မှာလည်း တင်းကျပ်လှသော စောက်ဖုတ်အသစ်စက်စက်ကို အားရကျေနပ်စွာ သဘောကျ ဆောင့်လိုးနေတော့သည် ။ “ ဘွတ်..ဘွတ်….ဗြစ်…ဗြစ်..” “ အင့်…အင့်…အ….အား…ရှီး…” သူသူအောင်ပေါင်နှစ်ဖက်ကားပြီး ခံရသက်သာစေရန်အပေါ်သို့ဖြဲထောင်ထားရာ အဖုတ်ကခပ်မို့မို့လေး ကော့ထားပေးသလိုဖြစ်နေတော့သည် ။
အဖုတ်ကလည်းအရည်တော်တော်များများ စီးကျလာ၍ အဝင်အထွက်ပိုမိုကောင်းလာသောကြောင့် ရန်နိုင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပေးနေ၏။ “ အား…ဖြည်းဖြည်းကိုနိုင်…အဆုံးထိဆောင့်တာပဲ…အင့်…အ” “ နာနေတုန်းပဲလား..သူသူ” “ နာတာပေါ့…ကြိတ်ခံနေတာသိလား …အသက်ရှုဖို့တောင်အချိန်မရဘူး…အရမ်းကြမ်းတာပဲ…ဟွန်း” “ ဗြစ်….စွပ်…ဗြစ်….” “ အ..အ…အိုး…အီး…” ဆောင့်လိုးနေရင်း ရန်နိုင်ကသူသူအောင့်နို့တွေကိုစို့ပေးလိုက်သည် ။ အဖုတ်ထဲလီးဝင်နေစဉ် နို့အစို့ခံရသော အရသာထူးကြောင့် သူသူအောင်နာကျင်မှုများပျောက်လာပြီးဖင်ကြိးကိုပြန်လည်ကော့ပေးနေမိ၏။
“ အ..အင့်…ဟင့်…အင့်..အား..” “ ခံလို့ ကောင်းလာပြီလား … သူသူ” “ ဟာ…ဘာတွေမေးနေမှန်းလဲမသိဘူး ” “ ရှက်နေတုန်းပဲလား…သူသူ ” “ ဟင့်..အီး..ရှီး…အားလားလား ..” “ ပြောလေ..သူသူ ” “ ဟင့်..အား…ဆောင့်ဆောင့်…ခံနိုင်ပြီး…အင့်…ရှီး ” ရန်နိုင်ဆောင့်ချက်ကို ထပ်မြှင့်တင်လိုက်ပြီး ဒုန်းစိုင်းပြေးသောမြင်းပမာ သွက်သွက်လက်လက်ရှိလှ၏ ။ သူသူအောင်ကလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိလာပြီမို့ ရန်နိုင်၏ဆောင့်ချက်နှင့်အတူ စည်းဝါးကိုက် ပြန်လည်းကော့ပေးနေ၏။ အလွန်ကောင်းမွန်သော အရသာထူးကို ခံစားနေမိတော့သည် ။
“ဗြစ်…ဒုတ်…ပြွတ်….ပြွတ်..” “ အားရှီး…အမလေး…ကောင်းလှချည်လားနော်..ဆောင့်..ကိုနိုင်…ဆောင့်” သူသူအောင်တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်တက်လာပြီး ရန်နိုင့်လက်မောင်းကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ကာ အဖုတ်မှ အရည်များပန်းထွက်လာ၏ ။ အဖုတ်နံရံမှာ ရှုံ့ချည်ပွချည်ဖြင့် လီးကိုတင်းကျပ်စွာညှစ်ညှစ်ပေးနေသောကြောင့် ရန်နိုင်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အားကုန်ပစ်ဆောင့်တော့သည် ။ “ ဗြစ်…ဗြစ်..ဒုတ်…ပြွတ်..” “ဖြင်း”ကနဲရှိန်းသွားကာ ခံစားမှုနှင်အတူ လီးထိပ်မှ အားရပြည့်ဝသော ခံစားမှုသုတ်ရည်များ တဗြစ်ဗြစ်နဲ့သူသူအောင်၏ စောက်ခေါင်းအဆုံးသို့ ဆောင့်နေ့ရင်း ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တော့သည် ။ သူသူအောင်၏ စောက်ပတ်လေးထဲ နွေးကနဲနွေးကနဲ ခံစားလိုက်ရ၏ ။ နှစ်ဦးစလုံးမောသွားသောကြောင့် ထပ်လျှက်တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖက်ထားကာ အမောဖြေနေတော့သည် ။
၅မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ ရန်နိုင်အပြင်သို့ထွက်သွားပြီး ရေနွေးဓါတ်ဗူးယူလာကာ အဝတ်ကိုရေနွေးဆွတ်ပြီး သူသူအောင်ရဲ့ သွေးအနည်းငယ်ဖြင့်ပေကျံနေသောအဖုတ်လေးကို တယုတယ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်သည် ။ သူသူအောင်ကတဖန် အဝတ်စကိုယူပြီးရန်နိုင့်လီးကို ပြန်လည်ပွတ်သပ်ပြီးသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတော့သည် ။ ရန်နိုင်မှာငယ်ရွယ်သူမို့ တခဏအတွင်း လီးကြီးမှာပြန်လည်မာကျောလာတော့သည် ။
“ ဟိဟိ…ကိုနိုင့်ဟာကြီးကပြန်မာလာပြန်ပြီး…တော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာ… ” “ ဒါပေါ့…သူသူက အပေးကောင်းတာကိုး ” “ ဟွန်း..ဘာအပေးကောင်းတာလဲ သူအတင်းလုပ်လို့ ဒီမှာကျိန်းစပ်နေတာပဲ …” “ ဟိုမှာကြည့်ဦး…အဲလိုမျိုး စုပ်ပေးပါလားဟင် ” ကွန်ပျူတာမှာ ပြထားသောအပြာကားမှ အမေရိကန်မနှစ်ယောက်က ဘဲတစ်ပွေရဲ့လီးကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စုပ်နေသောပြကွက်ကိုသူသူအောင်အားပေးကြည့်လိုက်သည် ။ “ အာ…အဲလိုမလုပ်ချင်ပါဘူး ”
“ မရဘူးကွာ…လုပ်ပေး ” ဟုပြောပြီးရန်နိုင်ကသူသူအောင်ခေါင်းကိုသူ၏ ပေါင်ခြံကြားသို့ဆွဲယူလိုက်၏ ။ သူသူအောင်နှုတ်ခမ်းကိုအတင်းစေ့ကပ်ထားသောကြောင့် လီးထိပ်ဖြင့်နှုတ်ခမ်းနီဆိုးသလို ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည် ။ နှုတ်ခမ်းသား၏ နူးညံ့သောအထိတွေ့ကြောင့် လီးထိပ်မှအရည်ကြည်စို့ထွက်လာတော့သည် ။ သူသူအောင်လျှာလေးထုတ်ကာ လီးထိပ်ကိုတို့ထိကြည့်လိုက်သည် ။
“ အား….ကောင်းလိုက်တာသူသူရယ် …. ပါးစပ်လေးဟပြီး ဒစ်ကိုငုံလိုက်လေ ” သူသူအောင်ပါးစပ်လေးဟပြီး ဒစ်ပြဲကြီးပါးစပ်ထဲဝင်လာအောင်စုပ်ယူလိုကသည် ။ ပါးစပ်မှပူနွေးသောအာငွေ့တို့ကြောင့် ရန်နိုင်ခမျာ အကြောပေါင်းတစ်ထောင်စိမ့်ပြီး ခေါင်းလေးမော့ကာညဉ်းတွားနေတော့သည် ။ “ အင်း..အီး…ဟုတ်ပြီ…ခွေထဲကအတိုင်း ဒစ်ကိုလျှာနဲ့လျှက်ပေး…အား… ” သူသူအောင်မှာ ဆရာပြောသည့်အတိုင်းတစ်သွေမတိမ်းလုပ်ဆောင်သော တပည့်ကောင်းတစ်ဦးပမာ ရန်နိုင့်လီးကို သကြားလုံးစုပ်သလို လျှာနဲ့လျှက်ပေးနေတော့သည်။
“ အင်း…အင်း..လီးတစ်ချောင်းလုံး..ပါးစပ်ထဲဝင်နိုင်သလောက် ဝင်အောင်စုပ်လေ…အင်း..ဟုတ်ပြီ ” ပြောရင်း ရန်နိုင်ကသူ၏ခါးကို အဖုတ်ထဲသွင်းသလို သူသူအောင်ပါးစပ်ထဲသို့ အနည်းငယ်ညှောင့်သွင်းလိုက်၏ ။ “ အွန့်…” ကနဲသူသူအောင့်လည်မျိုကို ရန်နိုင်၏ဒစ်က သွားဆောင့်မိ၍ပါးစပ်မှတံတွေးများစိုရွဲကတွဲကျနေတော့သည် ။ သူသူအောင်လည်း လီးစုပ်ပေးရတာအရသာတွေ့လာပြီး မက်မက်မောမောစုပ်ယူနေလေ၏ ။ လီးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်သလို လျှာနဲ့လည်းအပီပြင်ယက်ပေးသည် ။
“ ရပြီသူသူ ….. ခဏကြာ မထိန်းနိုင်ပဲ သုတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ် … သူသူ့အဖုတ်ကိုလိုးချင်သေးတယ် ” “ ဟင်..လုပ်ဦးမလို့လား ဒီမှာကျိန်းစပ်နေတာပဲ…ကိုနိုင် ” “ မရဘူးဟာ…လိုးချင်နေတာ ဒီမှာကြည့်ပါလား ” ရန်နိုင့်လီးကြီးကသူသူအောင့်ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တံတွေးတွေနဲ့ လက်ပြောင်နေတာမြင်ရတော့ သူသူအောင်တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ရမ္မက်စိတ်ပိုပြင်းလာတော့သည် ။ ရန်နိုင်ကသူသူအောင့်ခါးလေးကိုဆွဲယူပြီး ဖင်ဗူးတောင်းထောင်အကုန်းခိုင်းလိုက်ရင်း အနောက်ကနေ ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်သည် ။ လီးထိပ်ကိုကိုင်ပြီးအဖုတ်ဝလေးမှာ ပွတ်ကစားပေးလိုက်တော့ သူသူအောင်ဖင်ကြီးတရမ်းရမ်းဖြင့် အဖုတ်လေးယားယံလာပြီးညည်းညူနေတော့သည် ။
“ အား..အ..ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ ကိုနိုင်ရယ် ” ရန်နိုင်တစ်ယောက် သူသူအောင့်ခါးလေးကိုဆွဲကိုင်ကာ လီးကိုအဖုတ်ထဲတေ့၍ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ သူသူအောင်ရမ္မက်စိတ်ကြောင့် အဖုတ်မှထွက်လာတဲ့အရည်တွေကြောင့်မို့ လီးကလဲ လျှောကနဲ အဖုတ်လေးထဲသို့ဝင်သွားသော်လည်း အဖုတ်လေးထဲစီးကျပ်နေ၏ ။
“ အား…အ…အ..” သူသူအောင်မျက်နှာလေးမဲ့ကာ ညည်းတွားလိုက်သည် ။ ရန်နိုင်ကသူသူအောင်ဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်လျှိုပြီး နို့ကလေးကိုဆွဲညှစ်ရင်း လီးကိုတစ်ဆုံးထိဝင်အောင် ဆောင့်ချလိုက်သည် ။ “ အား…ကျွတ်ကျွတ်…အား” လီးတစ်ဆုံးထိဝင်သွားတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းဒစ်ပေါ်ယုံပြန်ထုတ် ၊ ပြန်ထိုးထည့်ဖြင့်ပုံမှန်လုပ်ပေးနေလိုက်တော့ သူသူအောင်တစ်ယောက်ခံနိုင်ရည်ရှိလာပြီး ဖင်ကြီးကိုနောက်ဖက်ပစ်ပစ်ကာကာ ကော့ပေးလာသည် ။ “ ဗြစ်….ဗြစ်…..ဒုတ်” “ မနာတော့ဘူးမဟုတ်လား သူသူ ” “ အင်း…..သိပ်မနာတော့ဘူး ကိုနိုင် ” “ ခံလို့ကောင်းလာပြီးပေါ့ ဟုတ်လား ” “ အင်း…အင်း….”
အစောတုန်းကလို သိပ်အကျပ်ကြီးမဟုတ်တော့ပဲ အဝင်အထွက်အတော်လေးကောင်းလာပြီးမို့ ရန်နိုင်က ခါးကိုဆွဲကိုင်ရင်း အားရပါးရဆောင့်တော့သည် ။
သူသူအောင်လည်းအံလေးကြိတ်ထားပြီး ရန်နိုင့်ဆောင့်ချက်တွေနှင့်အပြိုင် ဖင်ကြီးကိုအနောက်ဖက်သို့ စည်းချက်အညီပြန်ပြန်ကော့ပေးနေသည် ။ အခန်းထဲ တဖက်ဖက်နဲ့အသံတွေ ဆူညံနေတော့သည် ။
ရန်နိုင်လည်း ပြီးချင်ချင်ဖြစ်လာသည်မို့ အရှိန်ကိုပိုမြှင့်ပြီးဆောင့်လိုက်သောအခါ သူသူအောင်ဆီက တဟင်းဟင်း တအစ်အစ်နဲ့အသံတွေထွက်လာပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်ချက်ကော့တက်ပြီး ရန်နိုင့်လီးကြီးကိုအဖုတ်အသွင်းသားနှင့်ညှစ်ညှစ်ပေးရင်း အဖုတ်ထဲမှသုတ်ရည်များ ပန်းထွက်လာတော့သည် ။ အဖုတ်အတွင်းသားရဲ့ ညှစ်အားကြောင့် နဂိုကတည်းကပြီးချင်ချင်ဖြစ်နေသော ရန်နိုင်လည်းမထိန်းနိုင်တော့ပဲ အသားကုန်ဆောင့်ကာ သူသူအောင့်အဖုတ်လေးထဲသို့ သုတ်ရည်များ ဗြစ်ကနဲ ၊ ဗြစ်ကနဲပန်းထုတ်လိုက်တော့သည် ။ ထို့နောက်ရန်နိုင်က လီးတံကြီးကိုဆွဲထုတ်ကာ သူသူအောင့်အနားဝင်အိပ်လိုက်သည် ။
credit by ကာမစာအုပ်
July 10, 2018 July 10, 2018 by King Myanmar
Follow King Myanmar on WordPress.com